Nyein Aye Tun: 2008
လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိုသူတယောက်၏
ရိုးသားမှုရှိခြင်းဆို သောအချင်းအရာနဲ့တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ရိုးသားခြင်းကို ဘာနဲ့မှ
၀ယ်ယူ၍မရ ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံမှရနိုင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ရိုးသားခြင်းဆိုသောဂုဏ်ကိုမနှစ်သက်သူ မမြတ်နိုးသူရယ်လို့ ရှိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။Aလွန်
တရာကောက်ကျစ်ယုတ်မာသောသူတယောက် ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ရိုးသားမှုကိုတော့
မြတ်နိုးမှာအမှန်ပါဘဲ..ရိုးသားမှုကိုရယူတက်ဖို့ ဆရာတော်ြဦးဇောတိက က....
ကိုယ်ကိုကိုယ်လှည့်စားတာတွေရှိတယ်အဲဒီလိုလှည့်စားတာတွေ ဟာစိတ်ထဲမှာပင္ဋိပက္ခဖြစ်စေတယ်။ ထိုပင္ဋိပက္ခဟာ
ကုန်သွားပြီး အသိအမြင်ရှင်းလင်းမှု လွတ်လပ်မူ ရဖို့
အရေးမှာအင်အားသုံးစရာမကျန်တော့ဘူး။ အမှန်ကိုလက်ခံဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
မညာဖို့လိုတယ်။ ရိုးသားမှုရှိဖို့လိုတယ်။ ရိုးသားမှုရှိမှ အသိဥာဏ်ပွင့်လင်းမယ်။"
ရိုးသားခြင်းဆိုသော အခြင်းအရာကို ရယူနိုင်
တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကို ရှာဖွေလေ့လာ အားထုတ်ပြီး
ရိုးရိုးသားသားနေထိုင်ကျင့်ကြံကာ အေးချမ်းပျော်ရွင်စွာဖြင့် ကိုယ်ရဲ့
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 06:372comments:
ဘာအလုပ်လဲဆိုတော့ ငါဒီနေ့ဘာမကောင်းတာများ လုပ်ခဲ့မိသလဲ ဒါလေးပြန်ပြီး
စစ်ဆေးတဲ့အလုပ်ပါ။ ဒီအလုပ်ဟာ ဘ၀တိုးတက်ရေးအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့
အလုပ်ပါပဲ။ လောကရေးရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဓ ဓမ္မရေးရာမှာပါ ကြီးပွားတိုးတက်လိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမိမိရဲ့
ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနေကံတွေကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်း၊ညနေတိုင်းညနေတိုင်း၊ ညတိုင်းညတိုင်းအမြဲတမ်း
အိပ်ရာဝင်ကာနီးတိုင်း အမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မကြာခဏဆိုသလို အချိန်တိုင်း
တစ်နေ့တာအတွင်း ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းတဲ့ (ကိုယ်၊ နှုတ်၊စိတ်) အလုပ်တွေကိုရော၊ မကောင်းတဲ့
(ကိုယ်၊ နှုတ်၊စိတ်) အလုပ်တွေကိုပါ သေသေချာချာစစ်ဆေးရမယ်။အားနည်းချက် -အားသာချက်၊ ကောင်းမှု-မကောင်းမှု၊ အပြုသဘော-အဖျက်သဘော၊ အကျိုးရှိ- အကျိုးမဲ့၊ဒါတွေကို စေ့စေ့စပ်စပ်သုံးသပ်ရမယ်။
သတိပညာနဲ့ စေ့စပ်သေချာစွာ စစ်ဆေးသုံးသပ်ပြီးပြီဆိုရင် အားနည်းချက်ကိုပြုပြင်ရမည်၊ အားသာချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရမယ်၊ကောင်းမှုကို ခိုင်မြဲစေရမယ်၊ မကောင်းမှုကို ယိုင်လဲစေရမယ်၊ အပြုသဘောကိုဆောင်ရမယ်၊ အဖျက်သဘောကိုရှောင်ရမယ်၊ အကျိုးရှိကိုဆက်လုပ်ရမယ်၊ အကျိုးမဲ့ကို စွန့်လွတ်ရမယ်၊အဲဒီလိုဆိုရင် မိမိရဲ့အလုပ်၊ မိမိရဲ့ဘ၀၊ တိုးတက်အောင်မြင်လာမှာမလွဲပါဘူး။
ဒါကြောင့် လောကရေးရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဓမ္မရေးရာမှာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိရဲ့ ကိုယ်၊နှုတ်၊စိတ်အလုပ်တွေကို
အမြဲမပြတ်စစ်ဆေးနေခြင်းဟာ ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းပါဘဲ။။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 15:26 No comments:
တန်ဆောင်မုန်းလသည် မြန်မာ့ ၁၂လရာသီတွင် ရှစ်လမြောက်လဖြစ်သည်။ မိုးလေကင်းစင်၍ နက္ခတ်တာရာစုံ ထွန်းပသော လလည်းဖြစ်သည်။
ပင်းယခေတ် စာဆိုတော် စတုရင်္ဂဗလအမတ်ကြီးက ''သရဒံတု ကာလာနံ'' အချိန်အခါနေ့တွင် တန်ဆောင်မုန်းလသည် သာယာ
အလှပဆုံး အချိန်အခါဖြစ်သည်ဟု ဖွဲ့ဆိုခဲ့သည်။
သာမညဖလသုတ်တော် ဟောကြားတော်မူခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ကို သာမညဖလအခါတော်နေ့ဟူ၍ သတ်မှတ်ခဲ့
သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ အခါသမယတွင် သာမညဖလတရားတော်ကို နာကြားပူဇော်လေ့ရှိကြသည်။
ရာဇဂြိုဟ်ပြည့်ရှင် အဇာတသတ်မင်းသည် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသော သာမညဖလ သုတ္တန်ဒေသနာတော်ကို ကြားနာရသည့်အဆုံး
တွင် ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သည့် ဥပါသကာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူခဲ့သည်။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ ကျင်းပသော ပွဲတော်တစ်ခုမှာ ကထိန်သင်္ကန်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲဖြစ်သည်။ ကထိန်ဟူသည်မှာ ''ကထိန''ဟူသော
ပါဠိဝေါဟာရကို ပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်အကျိုးပေး မြဲမြဲခိုင်ခံ့သောအလုပ်၊ ဘုရားအစရှိသော ပညာရှိတို့က ''ကောင်း၏၊ ကောင်း၏''ဟု
ချီးကျူးသြဘာ ထောမနာပြုရသော အလုပ်ကျိုးကို ''ကထိန်''ဟု ခေါ်သည်။
ကထိန်ပွဲတော်သည် ရှေးဘုရင်လက်ထက် အဆက်ဆက်ကပင် ရှိခဲ့သည်။ ပဒုမုတ္တရဘုရားရှင်တို့၏ လက်ထက်၌ ကထိန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု ဗုဒ္ဓစာပေများ၌ တွေ့ရှိရသည်။
ကထိန်သင်္ကန်းအလှူသည် တစ်နှစ်တွင် တစ်လ၊ တစ်လတွင် တစ်ရက်သာပြုရသော ကာလဒါနမျိုးဖြစ်သည်။ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ
ခွင့်ပြုသောကာလမှာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့မှ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ ဖြစ်သည်။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ အရုဏ်တက်ချိန် မသိုးသင်္ကန်းများ ကပ်လှူရန်အတွက် ရက်လုပ် ပူဇော်ပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိပြီး နေ့မကူး၊ ရက်
မကူးဘဲ တစ်ရက်တည်း အပြီးရက်လုပ်လှူဒါန်းရသော သင်္ကန်းဖြစ်သဖြင့် မသိုးသင်္ကန်းဟုလည်း ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
ဘုရားရှင်သည် အဇာတသတ်မင်းအား တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင်
သာမညဖလသုတ္တန်တရားကို ဟောကြားတော်မူသည်။ ထို့ကြောင့် တန်ဆောင်
မုန်းလပြည့်နေ့ကို ''သာမညဖလအခါတော်နေ့''ဟု သတ်မှတ် ကျင်းပကြ
သည်။ သာမညဖလ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ ရဟန်းပြုရခြင်း၏ အကျိုးပင်ဖြစ်သည်။
သာမညဖလသုတ်တော်သည် ရဟန်းသံဃာတော်များအတွက် ကြေးမုံမှန်
ချပြ် ကီး တစခ်ုပငြ် ဖစသ် ည။် ကိုယ်ကျင့်သီလ ရှိသည်မရှိသည်ကို ဤသုတြ် ဖင့်
အရှင်ဒေဝဒတ်အား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် ၊ ဆရာတင်မှုမှားခဲ့သော အဇာ
တသတ်မင်းသားသည် ဖခင်ဘုရင် ဗိမ္ဗိသာရကို သတ်မိသည်အထိ အမှားကြီး
မှားခရဲ့ာဖခငြ် ကီး အား သတ်မိသည့်အချိန်မှစ၍ ညတိုင်းအိပ်မပျော်သောရောဂါ
ဝေဒနာစွဲကပ်တော့သည်။ ထိုဝေဒနာကို ပျောက်ကင်းအောင် မည်သည့်သမား
တော်၊ မည်သည့်ဆေးစွမ်းကောင်းကမျှ မကုသနိုင်တော့ပေ။ တန်ဆောင်မုန်း
သဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပနေစဉ် ဆီးနှင်းမြူတိမ်သူရိန် မီးခိုးမှောင်မျိုး မသွန်း
လပြည့်ဝန်းက ထွန်းလင်းသာယာနေသည်။ ကြည်နူးသာယာဖွယ် ကောင်းလှ
သည့် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည၏ အလှကိုခံစားရင်းရင်တွင်းအပူမီးကိုငြိမ်းအေး
စေနိုင်မည့် နည်းလမ်းများရရှိရန် တောင့်တမိလေသည်။ မှူးကြီး မတ်ကြီးများ
အား မည်သူ့ကို ချဉ်းကပ်ရလျှင် ကောင်းမည်နည်းဟု မေးမြန်းတိုင်ပင်ရတော့
ပုရာဏကဿပအစရှိသော တိတ္ထိဆရာကြီးများထံ ချဉ်းကပ်သင့်ကြောင်း
မှူးကြီးမတ်ကြီးတို့၏ တင်ပြချက်ကို လက်မခံဘဲ ဆရာဇီဝကအား မေးတော်မူ
သည်။ ဆရာဇီဝက၏ အကြံပေးချက်အရ ဘုရားရှင်ထံချဉ်းကပ်ဖို့ရန် ဆရာ
ဇီဝကကို စီစဉ်စေသည်။ အဇာတသတ်မင်း ဘုရားရှင်ထံ ဖူးမြော်ရန်သွားသော
အချိန်မှာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ ညချမ်းအချိန်ဖြစ်သည်။ ရာဇဂြိုဟ်မြို့အနီး
ဇီဝကသရက်ဥယျာဉ်၌ သီတင်းသုံးနေသော ဘုရားကျောင်းတော်သို့ သွားရာ
လမ်းခရီးတွင် ညချမ်းချိန်ဖြစ်ခြင်း၊ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ်ကြောင့် အမှောင်ကျနေခြင်း
တို့ကြောင့် လိုက်ပါသူအားလုံး မီးရှူးမီးတိုင် ကိုယ်စီကိုင်၍ သွားကြရသည်။
အဇာတသတ်နှင့်အခြံအရံများ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည၌ တန်ဆောင်တိုင်
မီးထွန်းပွဲ ကျင်းပကြသကဲ့သို့ ဖြစ်လေသည်။
အဇာတသတ်မင်းသည် ဘုရားရှင်ဟောကြားသော သာမညဖလ တရား
တော်ကို နာကြားရသဖြင့် အိပ်မပျော်သောရောဂါ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားတော့
သည်။ ရတနာသုံးပါးအပေါ် နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်သွားလေသည်။ ပုထုဇဉ်
တို့တွင် ရတနာသုံးပါးကို အကြည်ညိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ် ဧတဒဂ်ပေးခြင်းကိုပင်
ခံယူရရှိသည် ။အဇာတသတ်မင်း သည်ပထမသဂါင်္ ယနာတင်ဒကာအဖြစ်လည်းကောင်း
ခံယူခဲ့သည် ။ဘုရားရှုင်၏ ဓာတ်တော်များကို စုဆောင်း သမိ်း ဆည်း ၍ ဓာတ်ေ တာ်
တိုက်ကြီးကိုလည်း တည်ထားခဲ့သည။် ဗုဒ္ဓသာသနာနှစ်ကိုလည်းအတိအကျ သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် ရှင်မာလဲပွဲကိုလည်း ကျင်းပကြသည်။
အရိမေတ္တေယျ ဘုရားအလောင်းနတ်သားက သီဟိုဠ်ကျွန်းသား ရှင်မာလဲ
မထေရ်အား တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တိုင်း လူအပေါင်းတို့အား ဝေဿန္တရာ
ဇာတ်တော်ကို ဟောကြားပါရန် တောင်းပန်လျှောက်ထားသဖြင့် ရှင်မာလဲက
ဂါထာတစ်ထောင်ဖြင့် တန်ဆာဆင်အပ်သော ဝေဿန္တရာဇာတ်တော်ကြီးကို
ဟောပြောသည်ကို အထိမ်းအမှတ်ပြု၍ ဝေဿန္တရာဇာတ်တော်ကိုဟောပြောခြင်း၊
လှော်ကားတော်ပုံပြု၍ လှော်ကားထက်တွင် အသီးတစ်ထောင်၊ အပွင့်
တစ်ထောင်၊ ထမင်းထုပ်တစ်ထောင်၊ ဆီမီးတစ်ထောင်စသည်တင်ကာ လှူဒါန်း
ခြင်းဖြင့် ရှင်မာလဲပွဲကို ဆင်ယင်ကျင်းပကြသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် ဆေးပင်အပေါင်းကို စောင့်သော နတ်တို့
သည် မဲဇလီပင်စောင့်နတ်အား လာရောက်ခစားကြသည်။ ထို့ကြောင့်မဲဇလီပင်
သည် ဆေးပေါင်းခသည်။ ထိုအချိန်မျိုး၌ မဲဇလီဖူးကို စားသုံးခဲ့သော် အနာမျိုး
၉၆ပါးကင်းပြီး ဘုန်းကြီး သက်ရှည်နိုင်သည်ဟု ဆေးကျမ်းတို့တွင်ဖော်ပြပါ
ရှိသည်။ ထိုအဆိုအတိုင်း ဘေးကင်းရန်ကွာ ကျန်းမာချမ်းသာရန် မဲဇလီဖူးသုပ်
တနေ် ဆာငမ်ုန်း လတင်ွတနေ် ဆာငတ်ိုငမ်ီး ထနွ်း ပ၊ွဲ ကထနိ ပ် ၊ွဲ မသိုးသကင်္န်း
ရက်လုပ်ပွဲ၊ မဲဇလီဖူးသုပ်ဝေငှပွဲ၊ ရှင်မာလဲပွဲ၊ သာမညဖလ အခါတော်နေ့
တန်ဆောင်မုန်းလသည် ရိုးရာပွဲတော်အများဆုံးလဟု ဆိုနိုင်သည်။
ခြေခင်းလက်ခင်းသာသော မိုးအနှောင်း ဆောင်းအကူးကာလဖြစ်ခြင်း၊ အာဇဋာ
ကောင်းကင်ထက်တွင် မိုးတိမ်မိုးရိပ်တို့ကင်းစင်ခြင်း၊ ဆီးနှင်းမြူတိမ် သူရိန်
မီးခိုး မှောင်မျိုးမသွန်းသည့် လပြည့်ဝန်းအား သာယာကြည်နူးစဖွယ် တွေ့မြင်
ရခြင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်များ ဆင်ယင်ကျင်းပခြင်း
တို့ကြောင့် မြန်မာတို့၏ သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသော လတစ်လပင်
ဖြစ်ပါကြောင်းကို ပန်းတောင်းသန်းကြွယ်၏ ဆောင်းပါးအားဗဟုသုတအလိုဌာ တင်ပြလိုက်ပါသည်။။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 06:29 No comments:
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 14:42 No comments:
သရဏဂုံ။ ။ သရဏ +ဂမန ဟူသောပါဠိမှ သရဏဂုံ ဟုမြန်မာစကားဖြစ်လာသည်။
(သရဏ= ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ +ဂမန= အသိအမှတ်ပြုလျှက် ဆည်းကပ်ခြင်း) ဘုရား တရား
အရိယာ သံဃာသည် ကိုးကွယ်ရာ အစစ်ဖြစ်၏ ဟုအသိအမှတ်ပြုလျက် ရိုသေလေးမြတ်ဆည်းကပ်လိုသော
ကုသိုလ်စေတနာကို သရဏဂုံ ဟုခေါ်၏။ ၁- ဘုရားကိုးကွယ်မှု၊ ၂-တရားကိုးကွယ်မှု ၊၃- အရိယာသံဃာကိုးကွယ်မှုအားဖြင့် ၃ပါးရှိသည်။ သရဏဂုံသုံးပါးဟု ယခုကာလခေါ်ဆိုကြသည်မှာလည်း
ဤသုံးပါးပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိသန္တာန်၌ ထိုရတနာသုံးပါးကိုဆည်းကပ်ကိုးကွယ်လိုသော စိတ်စေတနာဖြစ်နေကြောင်း ထင်ရှားပြဖို့ရာ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ စသောပါဠိကိုဖြစ်စေ ။ဘုရားကိုးကွယ်ပါ၏
စသောမြန်မာစကားကိုဖြစ်စေ ၊ရွတ်ဆိုခြင်းသည် သရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းမည်၏။
ဗုဒ္ဓံ။ ။ ဗုဒ္ဓံ- အရဘုရားဟုဆိုရာ၌ရုပ်ပုံ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော်များလောက်တွင် စိတ်မထားဘဲဘုရားဂုဏ်တော်
ဖွင့်၌ပြခဲ့သော ဘုရားရှင်ကို ရည်မှန်း၍ထားရာ၏။
ဓမ္မံ။ ။ဓမ္မံ-အရ တရားဟုဆိုရာ၌ ယခုကာလဓမ္မကတိကတွေ၊ သံရှည်သံတိုဆွဲ၍ ယပ်လှဲယပ်ထောင်တရားများနှင့် စာအုပ်စာပေတွေလောက်တွင် စိတ်မထားဘဲ ဓမ္မစကြာ၊
အနတ္တလက္ခဏာသုတ် မဟာသတိပဋ္ဌာန် စသောဘုရားဟောပါဠိတော် ၊အဋ္ဌကထာကျမ်းစာအစဉ်နှင့်
မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်တရားများကို ရည်မှန်း၍ထားရာ၏။
သံဃံ။ ။သံဃံ- အရ သံဃာဟုဆိုရာ၌စိတ်မထားဘဲ သံဠာဂုဏ်တော်၌ပြခဲ့သော အရိယာသံဃာကိုရည်မှန်း
ထားရာ၏။ ဤသို့ရည်မှန်းနိုင်မှသာသရဏဂုံ အစစ်အမှန်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရတနာမြတ်သုံးပါးသည် အပ္ပါယ်ဆင်းရဲ ၊သံသရာဆင်းရဲတို့မှ မကျရောက်အောင်ဟောတော်မူသောအားဖြင့်
ကိုး =ရတနာသုံးပါးကို ကိုးစားရာ(အားကိုးစရာ)ဟူ၍လည်းကောင်း။
ကွယ်= ဘေးရန်ပေါ်လာလျင်ကာကွယ်ဖို့ရာ ဟူ၍လည်းကောင်း။
လဲလျောင်း=(မဘအပေါ်မှာယုံကြည်၍ သားသမီးများလဲလျောင်းအိပ်နေသလို) ရတနာသုံးပါးအပေါ်တွင်ကောင်းစွာယုံကြည်၍လဲလျောင်းဖိုရာ ဟူ၍လည်းကောင်း၊
ပုန်းအောင်း=အပ္ပါယ်ဘေး မရောက်အောင်ပုန်းအောင်းနေဖို့ရာ ဟူ၍ လည်းကောင်း။
မှီခို=မိဘကို သားသမီးကမှီခိုသကဲ့သို့ မှီခိုဖို့ရာ ဟူ၍လည်းကောင်း အသိအမှတ်ပြုလျက်
တစ်ကြိမ်ဆောက်တည် တစ်သက်တည်။ ။ဤသို့ယုံကြည်လေးမြတ်စွာ တစ်ကြိမ်လောက်ဆောက်တည်ထားလျှင်ယုံကြည်စိတ်မပျက်သမျှ တသက်လုံး
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 11:38 No comments:
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 15:08 No comments:
သီတင်းကျွတ်လရာသီအချိန်သည် မိုးမကုန်သေးသော်လည်း နေရောင်ခြည်
ဖြာစပြုလာပြီဖြစ်၍ သာယာတော့မည့် ဆောင်းရာသီ၏ အရုဏ်ဦးအချိန်ပင်
ဖြစ်သ ည။် ယင်း အချိန် တွင်ဝါဆိုကင်း လွတ်၊သီတင်းကျွတ်မို့ ဆိုသည်နှင့်
အညီ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ ပညတ်တော်အရ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁ရက်နေ့က
ပုရမိ ဝါဆိုတော်မြူကသည့် သဃာံတော်များသည်သီတင်း ကျွတ်လ ပြည့်နေ့တွင်
ဝါဆိုသည့်ကာလ ကုန်ဆုံးသွားကြပြီဖြစ်သဖြင့် အရပ်တစ်ပါးသို့ ညဉ့်အိပ်
ထိုရာသီတွင် အဿဝဏီနက္ခတ်သည် စန်းဟု ခေါ်သော လမင်းနှင့်အတူ
ယှဉ်ပြိုင်ထွန်းပပေသည်။ ရာသီရုပ်မှာ ချိန်ခွင်ကို ကိုင်စွဲသော ယောက်ျားရုပ်
သဏ္ဌာန်ဖြစ်ပြီး ငုံအာစွင့်စွင့်ရေထက်မြင့်ကာ ဖူးပွင့်နေကြရှာသော ကြာဖြူ၊
ကြာနီ၊ ကြာညို၊ ကြာပုဏ္ဍရိက်၊ ကြာပဒုမ္မာ ဟူသည့် ကြာမျိုးငါးပါးတို့သည်
သီတင်းကျွတ်လ၏ ရာသီပန်းများဖြစ်ကြပေသည်။ ထိုလတွင် ဆီမီးမြင်းမိုရ်ပွဲ
(ဝါ) တာဝတိံသာပွဲကို ရာသီပွဲအဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ နေ့တာ
ညတာညီမျှသော လဖြစ်သော ဤသီတင်းကျွတ်လကို ကင်းဝန်မင်းကြီးက
''သီတင်းကျွတ်ပြီ၊ တူရာသီ၊ အဿဝဏီရှိန်ဝါရွှန်း၊ ကြာမျိုးလည်းစို၊ မီးမြင်း
မိုရ် ဗဟိုအချာထွန်း''ဟု စပ်ဆိုခဲ့လေသည်။
သီတင်းကျွတ်လကို သန်တူ၊ ဝသန္တဥတု တူရာသီဖြစ်သောလ၊ သီတင်း
ဝါလကျွတ်သော လဟု ဝေါဟာရလီနတ္ထဒီပနီတွင် လည်းကောင်း၊ ကောက်
စပါးပင်များ ပေါက်ဖွားထောင်မတ်ထွက်လာသောလ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များ
မိမိတို့ ကျောင်းအရပ်အတွင်း၌သာ သီတင်းသုံးနေထိုင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်
သော လဟု မြန်မာလအမည်များ စာအုပ်တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး
ဂေါတမရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁ဝ၉ခုနှစ် ဝါဆို
လပြည့်နေ့၌ သာဝတ္ထြိပည်အနီးဝယ် ဘုရားရှင်၏ မိန့်တော်မူချက်နှင့်အညီ
ကောသလ္လဘုရင်၏ ဥယျာဉ်မှူး မောင်ကဏ္ဍစိုက်ပျိုးလိုက်သည့် ကဏ္ဍမ္ဗမည်
သော သရက်ဖြူပင်အနီးတွင် အယူလွဲမှားနေတာ တိတ္ထိတစ်သင်းတို့အား
တန်ခိုးပြာဋိဟာ ဖန်ဆင်းပြတော်မူကာ နှိမ်နင်းချေချွတ်တော်မူခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော သန္တုတိသနတ်သားအား
အဘိဓမ္မာတရား ဟောကြားတော်မူခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ရန် ရည်ရွယ်လျက်
တာဝတိံသာနတ်ပြည်သို့ကြွတော်မူ၍ သတ္တမ ဝါကပ်တော်မူပါသည်။ ဘုရား
ရှင်သည် ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ မြကျောက်ဖျာထက်တွင် ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ နေတော်မူ
လျက် မယ်တော်မိနတ်သားအမှူးပြုသည့် စကြဝဠာပေါင်း တိုက်တစ်သောင်း
တို့မှ ခညောင်းရောက်ရှိလာကြသော နတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်တို့၏ အလယ်၌
အဘိဓမ္မာတရားတော်မြတ်ကို ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး နေ့ညမစဲ ဟောကြား
အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်သည် ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်
အနက်ထက်ဝက်မျှပင်ရှိ၏ လွန်စွာများပြားရှည်လျား၍ ၀ါတွင်းသုံးလ
ဆက်တိုက်ဟောမှ ပြီးဆုံး၏။ ထိုမျှရှည်လျားသော ဒေသနာတော်ကို လူ့ပြည်
တစ်နေရာတည်း၊ ဣရိယာပုဒ်တစ်မျိုးတည်းဖြင့် ဆက်တိုက်နာကြားနိုင်သည့်
ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး မရှိသည့်အတွက် ယင်းအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကို လူ့ပြည်၌
ဟောကြားတော်မမူဘဲ နတ်ပြည်၌သာ ဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဘုရားရှင်၏ အဘိဓမ္မာတရားဒေသနာ ဟောကြားခြင်းသည် ဝါတွင်း
သုးံ လမြောကြ် ဖစ်သော သတီ င်း ကျွတ်လ ပြည့် နေ့၌ ပြီး ဆုးံ လေသည။် ယင်း သုိ့
တရားရေအေး အမြိုက်ဆေးကို တိုက်ကျွေးတော်မူပြီးနောက် ဤဝါကျွတ်ချိန်
တွင် တာဝတိံသာနတ်နန်းမှသည် သင်္ကဿနဂိုရ်သို့ သိကြားမင်း ဖန်ဆင်း
လှူဒါန်းသည့် ရွှေစောင်းတန်း၊ ငွေစောင်းတန်း၊ ပတ္တမြားစောင်းတန်းဟူသော
စောင်းတန်းသုံးသွယ်ဖြင့် နတ်အပေါင်းက လက်ယာဘက် ရွှေစောင်းတန်းမှ
လည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မာကြီးများက လက်ဝဲဘက် ငွေစောင်းတန်းမှလည်းကောင်း
ခြံရံလျက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်သည် အလယ်ဗဟို၌တည်ရှိသော ပတ္တမြားစောင်း
တန်းဖြင့် သက်ဆင်းကြွမြန်းတော်မူလေသည်။ ယင်းသို့ သက်ဆင်းကြွမြန်းရာ
တွင် ပဉ္စသိင်္ခနတ်သားက သုံးဂါဝုတ်ပမာဏရှိသည့် ဗေဠုဝနတ်စောင်းကြီးကို
လက်သံကုန်တီး၍ ပူဇော်ကာ လက်ယာနံပါးမှ လည်းကောင်း၊ မာတလိနတ်သား
ကလည်း နတ်၌ဖြစ်သော ပန်း၊ နံ့သာအမွှေးအကြိုင်တို့ကို ကိုင်စွဲလျက် ဘုရား
ရှင်ကို ပူဇော်ကာ လက်ဝဲနံပါးမှလည်းကောင်း၊ သုယာမနတ်မင်းသည် စာမရီ
သားမြီးယပ်ကိုခတ်လျက် လည်းကောင်း၊ သန္တုတိသနတ်မင်းသည် ပတ္တမြား
ယပ်ဝန်းကို တလွှဲလွှဲခပ်လျက် လည်းကောင်း၊ သိကြားမင်းသည် ဝိဇယုတ္တရ
ခရုသင်းကို မှုတ်လျက် လည်းကောင်း လက်ယာဘက်မှပင် ပူဇော်ကြကာ
သက်ဆင်းလိုက်ပါလာကြသည်။ ထိုနည်းတူ ကြွင်းသော စကြဝဠာတိုက်တို့၌
နေထိုင်ကြကုန်သော နတ်တို့မှ အမျိုးမျိုးသော ပူဇော်မှုကိုပြုကြလျက်လည်း
ကောင်း၊ လက်ဝဲဘက် ငွေစောင်းတန်းမှလည်း သဟံပတိဗြဟ္မာကြီးက ဗြဟ္မာ
ထီးဖြူကြီးကို ဆောင်းမိုးပူဇော်လျက် လည်းကောင်း သက်ဆင်းလိုက်ပါလာ
ပေသည်။ထိုအချိန်တွင်သာဝတြ္ထိ ပည်၌် ရြှိ ကကုန်သော ပရိသတ်အ ပေါင်း တိုသ့ ည်
လည်း သီတင်းကျွတ်လပြည့် မဟာပဝါရဏာနေ့၌ နံနက်စာစားကြပြီးလျှင်
''ယနေ့ မြတ်စွာဘုရားကို သင်္ကဿမြို့တံခါး၌ ဖူးမြော်ကြရကုန်တော့အံ့''ဟု
ထွက်လာခြဲ့ ကရာ အချန်အနည်း ငယ်အတွင်းမှာပင်သကဿင်္ မြို့ တခါံးသို့  ဆိုက်
ဤသို့ မြတ်စွာဘုရားသည် နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းခြံရံလျက် တာဝတိံသာ
နတြ် ပည်မှ သက်ဆင်း တော် ၍ူ လြူ့ ပည်သို့အရောက်စောင်း တန်း ဦး ၌ လကယ်ာ
ခြေတော်မချမီလျှင်ပင် ဘုရားရှင်ကို တပည့်ကြီး ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ်က
ပထမဦးစွာရှိခိုးပူဇော်ပြီး ထိုေ့ နာက်မှ ကျန်သောပရိသတ်တို့ကမြတ်စွာဘုရား
ကို ရှိခိုးဖူးမြော် ပူဇော်ကြလေသည်။ ထိုသင်္ကဿမြို့တံခါးဝ၌ စောင်းတန်းမှ
ပထမဦးဆုံး လက်ယာခြေတော်ချရာအရပ်သည် နောင်အခါဝယ် ''အစလ
ယင်းသို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာအမှူးပြုသော လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်း
ပါဝင်သည့် ပရိသတ်များက ဘုရားရှင်အား သောင်းသောင်းဖြဖြ ပူဇော်ပွဲကြီး
ကို ဆင်ယင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်မှာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ခုနစ်ဝါမြောက်တွင်
ဖြစ်၍် ယခု မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၇ဝပြည့်နှစ်တွင်နှစ်ပေါင်း၂၅၉ဝ(နှစ်ပေါင်း
၂၆ဝဝနီးပါး) ကြာမြင့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေသည်။
မြန်မာတို့သည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ ဆင်းသက်တော်
မူခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြု၍ ''တာဝတိံသာပွဲတော်''ဟု လည်းကောင်း၊
တာဝတိံသာနတ်ပြည်တည်ရှိရာ မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်မှ ဆင်းသက်တော်မူသည်
ကို အကြောင်းပြု၍ ''မီးမြင်းမိုရ်ပွဲ''ဟု လည်းကောင်း အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြ
ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပုဂံ
ခေတ်ထိုးကျောက်စာများတွင် ကောင်း မှုစာရင်း များ၌ပါဝင် ကြာင်း မတွေ့ ရရှိ
သောလည်း ပုဂ့ရှိမြင်း ကပါဂူ ပြောကြ် ကီး ဘုရားတွင်တွေ့ရှိရသော ပန်းချီကားအရ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှ သင်္ကဿမြို့သို့ ကြွဆင်းလာတော်
မူပုံ သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲထားသည်ကို ထောက်ရှု၍ ပုဂံခေတ်က မီးထွန်းပွဲတော်
အား ပုဂံသားများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း ယူဆနိုင်ပါသည်။
ကုန်း ဘောင်ခေတ်အလယ်ပိုင်း၌ သီတင်းကျွတ်လ ဆီးမီးထွန်းညှိပူဇော်ပုံ
ကို ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် ထင်ရှားသည့် စာဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သော
ဦးယာက ''ကြော်သဲအုတ်အော်၊ ပူဇော်ဆီမီး၊ ညီးညီးဝင်းဝင်း၊ ထွန်းလင်း
ရောင်ရှိန်၊ အာလိန်ငါးဆင့်၊ ရွှန်းရွှန်းတင့်သား၊ နတ်မင်းစံရာ၊ ဝတိံသာသို့၊
လေးဖြာရောင်စို၊ မြင်းမိုရ်ပွဲကြီး''ဟု လူးတားဖြင့် ဖွဲ့ဆိုရေးစပ်ခဲ့သည်။
သီတင်းကျွတ်လတွင် ပွင့်ကြသည့် ရာသီပန်းများဖြစ်သော ကြာမျိုး
ငါးပါးနှင့် ကျင်းပလေ့ရှိသည့် မီးမြင်းမိုရ်ပွဲစသည့် သရုပ်ကို ဖော်ညွှန်းလျက်
စာဆိုတော် ဖိုးသူတော်ဦးမင်းက ''ကြာငါးမည်ကြိုင်သင်းလို့၊ လျှံဝင်းတဲ့
ပြောင်ထိန်၊ ရွှေနန်းတောင်တော်ဦးမှာ ကွန့်မြူးမြင်းမိုရ်မီး၊ ညီးတဲ့ခါချိန်
ရှိဦးငယ်နှိမ်၊ သုံးကြိမ်ရိုပျောင်း၊ သက္ကစ္စာဂါရဝါနှင့် စဉ်အလာပူဇော်ပွဲကို
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်ကို
ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး ဟောကြားပြီးနောက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင်
လူ့ပြည်သို့ ပြန်ကြွလာသည်ကို အကြောင်းပြု၍ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့တွင်
''အဘိဓမ္မာ အခါတောေ် န'့ 'ကိုကျင်း ပကြသည။် သတီ င်း ကျွတ် လပြည့်နေ့တွင်
ရဟန်းသံဃာတော်များ ပဝါရဏာပွဲ ပြုလုပ်ကျင်းပကြသည်။ ပဝါရဏာ၏
အဓိပ္ပာယ်မှာ ဖိတ်ကြားခြင်း၊ တောင်းပန်ခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်းဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ပ၀ါရဏာပွဲကား သီတင်း သုးံ ဖော်ရဟန်း သဃာံတော်များအချင်း ချင်း တစ်ပါး
သော ပုဂ္ဂုိလ်အပေါ်တွင်ဖြစ်စေ မိမိအပေါ်တွင်ဖြစ်စေတရားတော်နှင့် မလျော်ညီ
ဖီလာဖြစ်မှုများရှိခဲ့ပါက အချင်းချင်း စုပေါင်းဝေဖန်ကြသည့်ပွဲ၊ သုံးသပ်ကြ
သည့်ပွဲ၊ အမှားကိုပြုပြင် အမှန်ကိုဝန်ခံကြသည့်ပွဲပင် ဖြစ်သည်။
''ငါ့ရှင်တို့၊ တပည့်တော်သည် သံဃာကိုဖိတ်ကြားပါ၏၊ တပည့်တော်
တို့၏ အပြစ်ကို မြင်သော်လည်းကောင်း၊ ကြားသော်လည်းကောင်း၊ သံသယ
ရှိသော်လည်းကောင်း တပည့်တော်အားသနားသောအားဖြင့် ပြောဆိုသိပေး
ကြပါ၊ အပြစ်ကို ကုစားပါမည်''ဟူ၍ ပဝါရဏာပြုကြသည်။
ထြို့ ပင်မုိး လေကင်း လွတ်ပြီး ဥတုရာသီသာယာသည့်အချိန်
အခါလည်း ဖြစ်သည်။ ဤလတွင် ဘိုးဘွား မိဘများ၊ ဆရာသမားတို့ထံသို့
တပညသ့်ားမြေးများက လှူဖွယ်ပစ္စည်းများဖြင့်ကန်တြော့ ကလေရာ
မိဘနှင့် သားသမီး၊ ဆရာနှင့် တပည့်တို့အကြား ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှု၊ ရိုသေ
လေးစားမှုများ တိုးပွားကာ ကြည်နူးချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပေသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ခြေခင်းလက်ခင်းသာချိန်ဖြစ်သည့် ဤသီတင်းကျွတ်လတွင်
ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖုံဖုံကို ပြုလုပ်ကြလျက် စိတ်လက်ကြည်နူးစွာ တရား
ဘာဝနာ ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကြောင်း ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါ
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 13:22 No comments:
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 16:46 No comments:
ရဟန်း ပညာရှိ၊ လူပညာရှိတို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မ၌ အခြေခံလျက်စကားပြောခြင်းဆိုင်ရာရှောင်ရန်၊
ဆောင်ရန်များကို ညွှန်ပြခဲ့သည်မှာအများအပြားပင် ရှိပေသည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ်စာဆို ညောင်ပင်သာ ဦးပုညက(သူတရတာနာဆုံးမစာ)တွင်
တစ်နည်းတွေ့ရုံ၊ ကျမ်းမစုံ၊အာရုံတယ်ပြီး မကိုးနှင့်၊
ကေစိသဘော၊ တစ်ကျမ်းဟော၊ အပြောတယ်၍မကင်းနှင့်၊
ဂန္ထန္တရ၊ မနှံ့ကြ၊ ၀ါဒတယ်၍ မငြင်းနှင့်၊
အတ္တနောမတိ၊ ယူမှန်းသိ ၊ဖိ၍ပြိုင်၍ မပြောနှင့်၊
ကိုယ့်ထက်ဥာဏ်ရှိ၊ တက်မှန်းသိ မိမိကိုယ်ကိုမမြှောက်နှင့်၊
ဟူ၍ သတိပေးထားလေသည်။ အင်းဝခေတ်စာဆိုအရှင် ရှင်မဟာရဌသာရ၏ဆုံးမစာ
"ငါ၏စိတ်တွင်၊ ထင်၏မလွဲ၊ လိပ်ခဲတည်းလည်း ဟုတ်တည်းဧကန် ၊အာမသန်နှင့်၊
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 15:13 No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အခြေခံအားဖြင့်စောင့်ထိန်းကျင့်သုံးအပ်သည့် သီလများကို စာရိတ္တသီလနှင့် ၀ါရိတ္တသီလ
ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ စာရိတ္တသီလဟူသည်မှာ ပြုရမည့်ဝတ္တရားအသွယ်သွယ်ကို မငြင်းမပယ်ပြုကျင့်လိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ ၀ါရိတ္တသီလဟူသည်မှာ မသင့်လျော်မမှန်ကန်သဖြင့်
ရှောင်ကျဉ်အပ်သော အရာများကို 'ဒုစရိုက်'ဟုခေါ်ပါသည်။ဒုစရိုက်၏တခုခြင်းအဓိပ္ပာယ်မှာ
(ဒု= မကောင်းသော။ စရိုက်/စာရိတ္တ=အကျင့်) ဟုဆိုလိုပါသည်။
ဒုစရိုက် (၁၀)မျိုးရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ ကိုယ်ဖြင့်ပြုသော ဒုစရိုက်(ကာယကံ) (၃)ခု၊ နှုတ်ဖြင့်ပြုသော
ဒုစရိုက်(၀စီကံ) (၄)ခု၊ စိတ်ဖြင့်ပြုသော ဒုစရိုက်(မနောကံ) (၃)ခုတို့ဖြစ်ပါသည်။
စကားပြောခြင်းဟူသည်မှာ နှုတ်မှ(၀စီကံ)တွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ၀စီကံဒုစရိုက်(၄)ခုမှာအောက်ပါအတိုင်း
(၁) မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်း (မုသာဝါဒ)
(၂) ကုန်းချော၊ ကုန်းတိုက် ပြောခြင်း (ပိသုဏ၀ါစာ)
(၃) ကြမ်းတမ်းစွာပြောခြင်း (ဖရုဿဝါစာ)
(၄) အကျိုးမဲ့ ၊အချည်းနှီး ပြိန်ဖျင်းစကားပြောခြင်း (သမ္ဖပ္ပလာပ၀ါစာ)
ဆောင်ပုဒ် ။ ။ လှည့်စား ရန်တိုက်၊မိုက်မိုက် ကန်းကန်း၊ နှုတ်ကြမ်းလေ့ခြင်း၊ ပိန်ဖျင်းစကား
ဤ၀စီဒုစရိုက်(၄)မျိုးတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု နေ့စဉ်နှင့်အမျှကျူးလွန်မိလျက်သားဖြစ်နေ
ကြလေသည်။ ၀စီဒုစရိုက်လေးမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်အပ်သည်ဟုသိထားကြသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့သည်လည်း နေ့စဉ်ဘ၀များတွင် သိလျက်နှင့်ကျူးလွန်မိတက်ကြပါတယ်။
မုသားပြောကြားခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ လူအချင်းချင်းတို့သည် စကားကိုအားကိုးပြီးယုံထိုက်မယုံထိုက် ဆုံးဖြတ်ကာဆက်ဆံရခြင်းဖြစ်ရာ မမှန်သောစကားကိုအားကိုးက
လောကသည် လိမ်လည်မှုအမှားများဖြင့် အတိပြီးကာ ကမောက်ကမဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မုသားဆိုရာတွင်
အရာဝတ္တုက ဟုတ်မှန်ပါလျက်မဟုတ်ဟုပြောခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ အရာဝတ္တုကမဟုတ်မှန်ပါလျက်နှင့်
(၁) မဟုတ်မမှန်သော အကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်း၊
(၂) မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် သူတစ်ပါးအားအမှားသိစေလိုသောစိတ်ဆန္ဒရှိခြင်း။
(၃) ထိုစိတ်ဆန္ဒအတိုင်း ကိုယ်နှုတ်လုံ့လပြုခြင်း၊
'မုသားပြောသောပုဂ္ဂိုလ်မှာ မလုပ်ရဲတဲ့အကုသိုလ်ဘာမှမရှိတော့'ဟုဆိုပါသည်။ (ဤတွင် မှတ်သားစရာကောင်းလှသော ဗုဒ္ဓသြ၀ါဒတစ်ရပ်ရှိပါသည်။ မမှန်သောစကားကိုပြောခြင်းသည် အပြစ်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် အမှန်ကိုမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေခြင်းသည်ကော အပြစ်မြောက်ပါသလားဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က နှစ်မျိုးခွဲပြ၍မိန့်ကြားတော်မှုခဲ့ပါသည်။
အကျိုးမရှိလျှင် ဘာမျှမပြောသော်လည်းပြောသင့်၍ ပြောခြင်းသည်မေတ္တာပင်ဖြစ်သည်။ ပြောသင့်ပါလျက်
မပြောခြင်းသည် တာဝန်မကျေမှုပင်ဖြစ်၍ အပြစ်ထိုက်ပါသည်။မုသာဝါဒ ပြောဆိုခြင်း၏ အပြစ်ကိုဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ) ၏စာအုပ်တအုပ်တွင်...
"မုသားစကား ၊ ပြောဆိုငြားမှု
က္ကုနြေ္ဒနောက် ၊ ပုံယွင်းဖောက်၏
မရောက်သြဇာ ၊ နှုတ်လျှာကြမ်းထော်
ကုန်းချော ကုန်းတိုက် ပြောဆိုခြင်းသည်လည်း လွန်စွာအန္တရာယ်ကြီးလှပါသည်။ မှန်ကန်သောဆက်ဆံရေးဖြင့် သင့်မြတ်နေသည့်နှစ်ဦး နှစ်ဖက်ကြား အထင်အမြင်လွဲမှားအောင် သံသယမှ
အာဃာတအထိကြီးထွားအောင် ကုန်းချောစကားပြောခြင်းသည် ပြောသူအတွက်သာမက နာသူအတွက်ပါ
အန္တရာယ်ကြီးမားလှပါတယ်။ ပိသုဏ၀ါစာသည်နားလည်မှု၊ မေတ္တာတရား၊ စာနာခြင်းများနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို
ခြိမ်းခြောက်ပျက်စီးစေသော ဧရာမ မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဖရုဿဝါစာ- ကြမ်းတမ်းစွာပြောဆိုခြင်းသည်ကား ဒေါသကိုအခြေခံလျက်မောဟ (မသိနားမလည်ခြင်း)ဖြင့်
မွမ်းမံကာထွက်ပေါ်လာသော ဆဲရေးတိုင်းထွာ ကျိန်ဆဲအပြစ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကြမ်းတမ်းရိုင်းပျသောစကားလုံးတို့ကို မည်သူမျှမနှစ်သက်ကြပါ။။ ဖရုဿဝါစာ၏ အကျိုးဆက်မှာ အမုန်းနှင့်
သမ္ဖပ္ပလာပ၀ါစာ- ပြိန်ဖျင်းသောစကားဟူသည်ကား အနှစ်မဲ့၊ အကျိုးမဲ့သောစကားသွမ်း၊ စကားဖျင်း၊
စကားပေါ့များကိုဆိုလိုပါသည်။ လူမှုဘ၀အတွင်းနေထိုင်ရှင်သန်ရသူများအဖို့ ကြိမ်ဖန်ပေါင်းများစွာ
အမှုအမှတ်မဲ့ပြောဆိုဖြစ်သော စကားမျိုးလည်းဖြစ်သည်။ဤစကားမျိုး ပြောဆိုလေ့အကျင့်စွဲသူများမှာ အသိဥာဏ်အလဟဿ ကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်တန်ဖိုးမဲ့ လျှပ်ပေါ်သောဘ၀ကို တည်ဆောက်မိခြင်းစသည့်အပြစ်များကို ခံစားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊မနောကံ တည်းဟူသောကံသုံးပါးမှ
သီလ သမာဓိ ပညာပြည့်စုံကြွယ်ဝကြလျှက် ..ရှေ့ဆက်လျှောက်မည့်ဘ၀လမ်းတိုင်းတွင်
အမှားအယွင်းမရှိစေဘဲ ..မိမိတို့အလိုချင်ဆုံးအတမ်းတဆုံး နိဗ္ဗာန်ခရီးလမ်းကိုတက်လမ်းကြပါစို့လို့
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 13:21 No comments:
'သီလမရှိသူရဲ့ အနှစ်တစ်ရာအသက်ရှင်ရခြင်းထက် သီလရှိသူရဲ့တစရက်တာအသက်ရှင်ရခြင်းက
အဆပေါင်းများစွာ ပိုပြီး မြင့်မြတ်ပါတယ်' (ဗုဒ္ဓ)
ကာယကံအမှားအယွင်းများ ရှောင်ကြဉ်မှု၊ ၀စီကံအလွဲအချော်များစောင့်ထိန်းမှုကို သီလလို့ခေါ်ပါတယ်
မပြုသင့်တဲ့ ကိူယ်မှုလုပ်ရပ်တွေ မပြု၊ မပြောသင့်တဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေ မပြောဘဲ ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စည်း
ကိုယ်အမှား၊ နှုတ်အမှားကို ပြုထားတဲ့သူ(သီလမရှိတဲ့သူ)ရဲ့စိတ်အစဉ်ဟာ နောင်တတရားတွေနဲ့ပူလောင်
ကျွမ်းမြိုက်နေပါတယ်။စိတ်ပူလောင်နေသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကြံစည်တွေးခေါ်မှု၊ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်မှုတွေဟာ အမှားတွေချည်းဖြစ်နေမှာပါ၊ ဒါမှမဟုတ် အမှားတွေရောနှောနေမှာပါ။ဒါနဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
ဒါပေမဲ့ သီလမရှိသူရဲ့ဒါနဟာ ကြွက်ချေးရောနေတဲ့ ဆွမ်းဆန်လို ဖြစ်နေလို့အကျိုးပေးမစင်ကြယ်နိုင်ပါဘူး။
သီလရှိသူရဲ့ ဒါနကတော့ အမွှေးသေတ္တာထဲလှောင်ထားတဲ့ သလေးဆန်နဲ့ အလားလို့ အကျိုးပေးလည်းစင်ကြယ်၊
သီလမရှိတော့ စိတ်မအေးချမ်း၊ စိတ်မအေးချမ်းတော့ စိတ်မတည်ငြိမ်၊ စိတ်မတည်ငြိမ်တော့ အသိဥာဏ်
မထွက်၊ သီလပျက်ရင် သမာဓိရော၊ ပညာရောဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ သီလရှိရင်တော့ စိတ်အေးချမ်းတဲ့အတွက် သမာဓိရောပြည့်ပြည့်၀၀ အားကောင်းနိုင်ပါတယ်..
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 08:46 No comments:
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 03:57 No comments:
တရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်သန်ရာဝေဒနာအပေါ်မှာ တည့်တည့်ရှုမှတ်တာခွာပြီး ရှုမှတ်တာ ကြိုက်သလိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့အလိုကတော့ ဝေဒနာကိုခွာပြီးရှုမှတ်တာ ပိုလို့နှစ်သက်ကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ဝေဒနာကိုတည့်တည့်ထားရှုမှတ်ရာမှာ သမာဓိအားကြောင်းဖို့လိုကြောင်း သမာဓိအားနည်းရင်တရားအမြင်ဘေးလွင့်ဖိတ်စင်တက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။တရားရှုမှတ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါအုံးမယ်….
ရှေးအခါက ဗာရာဏသီပြည်မှာ မဟာတိဿ နဲ့ စူဠတိဿ ဆိုတဲံညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အရွယ်ကိုယ်စီရလာတဲ့ အခါမှာတော့ ညီဖြစ်တဲ့စူဠတိဿ
မှာ လူတို့ထုံးတမ်းအရ အိမ်ထောင်သားမွေးစီးပွားရေး ပြုလို့နေဖြစ်ပါတယ်။ အကိုကြီးဖြစ်သူ
မဟာတိဿကတော့ စီးပွားရေးရှာဖွေပြီးမှတရားအမြင်ရလာကာ ညီဖြစ်သူကိုသူပိုင်ဆိုင်သမျှ
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပေးပြီး ရဟန်းဘောင်ဝင်ရောက်ကာ စိတ္တကတောင်ပေါ်မှာတပါးတည်းကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့ တရားအားထုတ်နေပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ ညီတော်စူဠတိဿရဲ့ဇနီးမယားက မကောင်းသောအကြံဆိုးများဖြင့် မဟာထိဿမထရ်များ ရဟန်းဘ၀မှာမပျော်လို့ လူ့ဘောင်ပြန်လာရင် ငါတို့ပြန်ပြီးအမွေပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ လူမထွက်ခင်လက်ဦးမှုယူပြီး သတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့် တစ်ရန်အေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး တဏှာအပေါ်တပ်မက်မှုလွန်ကဲစွာဖြင့် လူသတ်သမားများကိုအခပေး၍သတ်စေခဲ့ပါတယ်။
လူသတ်သမားများကလည်း မဟာတိဿထေရ်ကိုတွေ့လျှင် ကြိုးနှင့်တုတ်ပြီးသတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။မဟာတိဿထေရ်လည်းအကြောင်းစုံကို သိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စိတ်ငြိငြင်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့စကားပြောလိုပါတယ်ခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ “ဒကာတို့သတ်မယ်ဆိုလည်း
သတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ဒီတညတာမျှ ကိုယ်တော့်ကုို တရားအားထုတ်ခွင့်ပေးပါ၊
ရာဂတန်းလန်းပုထုဇဉ်ဘ၀နဲ့ ခန္ဓာကို မချုပ်ငြိမ်းချင်သေးလို့ပါ။တရားအားထုတ်နေတာမှန်ပေမဲ့ တစ်မက်တစ်ဖို မရသေးလို့ပါ”ဆိုပြီးတော့ ပန်ကြားပါတယ်။ သူသတ်သမားများကလည်း
အရှင်ဘုရားထွက်မပြေးဖို့ ဘယ်လိုမျိုးအာမခံပေးနိုင်မှာလဲလို့မေးတော့ ကိုယ်တော့်ကိုကြိုးတော့ဖြေပေးပါလို့ပြောပြီး အနီးနားမှာရှိတဲ့ ကျောက်ခဲတုံးနဲ့သူ့ခြေထောက်ကု ရိုက်ချိုးပစ်ပါတယ်။”ကိုယ်တော် အာမခံနိုင်တာကတော့
ဒါပါပဲလို့ပြောဆိုကာ” ဝေဒနာကိုခွာပြီးရှုမှတ်ပါတယ်။ ကျိုးနေတဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်အပေါ်မှာ
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အောင့်နာခြင်းအပေါ်မှာ စိတ်မပို့လွတ်ပါဘဲထွက်သက် ၀င်သက်သတိသက်သက်ဖြင့်ရှုမှတ်ပွားများရာ နံနက်မိုးသောက်အချိန်ရောက်သော် တရားထူးရရှိကာ ရဟန္တာစစ်စစ်ဖြစ်သွားတော်မှုခဲ့ပါသည်။
ပြောလိုတာကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ တရားအမြင်ကိုအမှန်အတိုင်းရှုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝိပဿနာတရားအာရုံကို ခိုင်မြဲတဲ့သတိသမာဓိကပ်ပြီးရှုမြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် တရားအမြင်ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
တရားအမြင်ရလာတဲ့ သူရဲ့ဘ၀ခရီးဆိုတာလည်း အမှားကင်းစင်နေမယ်မှာ ဧကန်အမှန်ပင်
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 14:01 No comments:
တရားရှာကိုယ်မှာတွ့ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားလေးရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့တရားဆိုတာ တခြားမှာရှာစရာမလိုပါဘဲ မိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကို အမှန်အတိုင်းရုပ်တရား နာမ်တရား၊ ကွဲပြားသိစေဖို့နဲ့ ရုပ်တရား နာမ်တရား၊တို့ရဲ့ ကုန်လွယ်ပျက်စီးတက်ပုံများ စတဲ့သဘောအမှန်ကိုထင်မြင်သိစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓကိုယ်မှာဖွဲ့တည်သော သုံးဆယ့်နှစ်အဖို့စုများဆိုတဲ့ အူမ၊ အူအိမ်၊ အစာဟောင်း၊
အစာသစ်ပြည်သွေးစသော ရွံရှာစက်ဆုပ်ဖွယ်ရာဖြစ်လို့မို့ အနိဋ္ဌာရုံသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။
အနှစ်မပါအကာသက်သက်လို့ပြောနိုင်ပါတယ် ရှုမြင်သူရဲ့ ဥာဏ်စဉ်အားလျော်စွာ ခန္ဓာ ကိုယ်ပေါ်မှာတပ်မက်မှုများ အတန်အသင့်ကင်းသွားနုိူင်ပါတယ်. မတင့်တယ်ဖွယ်ရာခန္ဗာကိုယ်ထဲမှာမှ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သောတရားအမှန်ကို ရှာဖွေကြရပါမယ်။
ဘယ်လိုမျိုး ရှာဖွေရမှာလဲဆိုတော့ ဥပမာဆိုပါဆို့။ရုပ်တရားနာမ်တရားဆိုတာ အိုတက်သောဇရာအရိပ်ငွေ့များရှိနေတာကို သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်နာမ်ဓမ္မတို့သည်
ဖောက်ဖျက်ပျက်စီးနိုင်တာမို့ နာတက်ခြင်း ။ဗျာဓိတရားကိုသိစေခြင်း၊ အဆုံးမှာစုတိပျက်ကြွေ
သေခြင်းတရားတို့ကို အမှန်အတိုင်းသိစေမှာပင်မဟုတ်ပါလား။ တရားအမြင်ရလာတဲ့အခါမျိုးမှာ တရားအမှတ်ပါတဲ့သတိတရားကို ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံ တစ်ခုခုအပေါ်မှာ စူးစိုက်ပြီးကျင့်ကြံမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ပျက်မှန်သဘောဥာဏ်တွေကို နားလည်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
နှာသီးဖျားမှ ၀င်သွားတဲ့လေရယ်၊ နှာသီးဖျားမှပြန်ထွက်တဲ့လေရယ် အဲဒီလိုမျိုးလေ၀င်လေထွက်အပေါ်မှာ သတိအမှတ်ဖြစ်စေလိုက်တော့ တခြားသောအာရုံများ မှာဖြစ်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသမာန်မာနများကို တဒင်္ဂအနေဖြင့်ပတ်သတ်ပြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အကုသိုလ်အလုပ်များကိုမလုပ်စေတော့ဘူးပေါ့။ အပိုအလုပ်တွေနဲ့အစားထိုးပြီးဖြစ်နေပါတယ်။
ရှုမှတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဖောက်ပြန်တက်ပုံများ၊ ဝေဒနာအတိုးအလျော့တွေဖြစ်လာမှာအသေအချာပါပဲလေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အောင့်လာတာမျိုးနာကျင်ကိုက်ခဲတာမျိုး စတဲ့ဖောက်ပြန်ပုံတွေကိုတရားအမှတ်သတိဖြင့် ကပ်ရှုပြီးတော့ပွားများနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သမာဓိတရား ရင့်ကျက်လာတာနဲ့ဝေဒနာတိုးလာပုံ၊ လျော့သွားပုံတို့ကိုသိလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိတွေ ပယ်ရှားပြီးဖြစ်နေမှာမလွဲပါဘူး ရှုမြင်သူရဲ့ ဥာဏ်စဉ်အနိမ့်အမြင့်ပေါ်မှာ ကွဲံလွဲတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 03:11 No comments:
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 14:13 No comments:
၀ပ္ပသုတ်တွင် ကိလေသာမှလွတ်မြောက်သောစိတ်ရှိသူသည် မျက်စိဖြင့်အဆင်း၊ နားဖြင့်အသံ၊
နှာခေါင်းဖြင့်အနံ့၊ လျှာဖြင့်အရသာ၊ ကိုယ်ဖြင့်အတွေ့အထိ၊ စိတ်ဖြင့် ဓမ္မာရုံတို့ ဖဿတွေ့ထိ၍ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ခံစားမှုဝေဒနာတို့အပေါ်တွင်ဝမ်းသာ ၀မ်းနည်းခြင်းမရှိဘဲ
ဤသို့အားဖြင့် ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်အေးငြိမ်းလျက်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနေနိုင်သည်။ မဇ္ဈိမနိကာယ် ပဉ္စတ္တယသုတ်တွင် ဖဿယနတ ခြောက်ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ သာယာဖွယ်၊ ငြီးငွေ့ဖွယ်၊ ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၍မစွဲလမ်းဘဲလွတ်မြောက်ခြင်းသည် မြတ်စွာဘုရားထိုးထွင်းသိမြင်အပ်သည့် အမြတ်ဆုံးငြိမ်းအေးကြောင်း တရားပေတည်းဟု မိန့်ကြားတော်မှုသည်။ ဓမ္မပဒတွင်လည်း ဘုရားအစရှိသော ပညာာရှိတို့သည် ဈာန်တရားကိုလေ့လာပွားများကြ၍ ကိလေသာငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အာရုံ၌ မွေ့လျော်ကုန်၏။ကိလေသာငြိမ်းရာကိလေသာသည် အလွန်ကောင်းမြတ်၏ဟု
ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒသုတ်တွင် အကြောင်းကိုစွဲ၍ အကျိုးဖြစ်ပုံတို့ကိုဟောကြားတော်မူသည်။ မိလိန္ဒပဥှာလာ နိရောဓ နိဗ္ဗာနပဥှာတွင်အတွင်းအပ အာယတတို့ကို မနှစ်သက် မစွဲလမ်းမှုကြောင့်တပ်မက်မှုတဏှာချုပ်သည်။ ထို့နောက် ဥပါဒါန်ချုပ်သည်။ ထို့နောက်အိုခြင်း၊ သေခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ နှလုံးမသာမယာခြင်း၊ပြင်းစွာပင်ပန်းတို့ချုပ်ကုန်သည်။။။
ဤသို့အလုံးစုံသော ဆင်းရဲအစုတို့ချုပ်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်မည်၏ဟု မိန့်ဆိုထားသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် စွဲလမ်းခြင်းတဏှာကုန်ခမ်းခြင်း၊ ရာဂ၊လောဘ၊ ဒေါသချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊အာသဝေါတရား၊ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ သင်္ခါရတရားတို့ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ချဲ့ထွင်မှတ်သားတက်သော ပပဉ္စသညာတရားစုတို့
ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ယင်းတို့မှလွတ်မြောက်ခြင်းတည်းဟူဥော ၀ိမုတ္တိတ၇ားတို့သည် နိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်သည်။
ချမ်းသာဟူသမျှတို့တွင် နိဗ္ဗာန်သည်အမြတ်ဆုံးချမ်းသာဖြစ်သည်။ သင်္ခတတရား၊ အသင်္ခတတရားတို့တွင် တဏှာကုန်ရာ၊ ကိလေသာတို့ကင်းကွာရာ၊ ၀ဋ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာ
ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ လူအများနားလည်ခံစားသည့် အာရုံခြောက်ပါး
ပေါ်တွင်တည်ရှိသော ခံစားမှုဝေဒနာမှ လွတ်မြောက်သည့်ရွင်လန်းချမ်းမြေ့မှုသုခပင်ဖြစ်သည်။
ဤနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ဤဘ၀၌ပင် မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသည်။သီလ၊ သမာဓိ၊ပညာနှင့်ပြည့်စုံသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဥည်ဟုမြတ်စွာဘု၇ားဟောကြားတော်မှုထားသည်။ သို့အတွက် တရားဘာဝနာများအားထုတ်ကျင့်ကြံပြီး ဤဘ၀၌ပင် မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုလျှင် အေးငြိမ်းမှု သဘောတရားပင်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာငါးပါး ရုပ်နာမ်များ၊ အာသဝေါတရားများ၊ ကိလေသာများ ချုပ်ငြိမ်း၍အအေးငြိမ်းးဆုံး
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 11:40 No comments:
မဟာသမယသုတ်တွင် တဏှာကိုပယ်လျှင်ဇာတိစသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်ကင်း၏ဟုပြောကြားတော်မူခဲ့သည်။ ဥပဒါနသုတ်တွင် ဥပဒါန်နှင့်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းသံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့၌သာယာ
ဖွယ်ဟု ရှုနေသူအား၊ တဏှာသည်ပွားများကြောင်းအပြစ်ဟု ရှုနေသူအား၊
ငါတို့၏ဆရာ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် လိုချင်တပ်မက်မှုပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိသည်ဟု
ဒုတိယဟာလိဒ္ဒိကာနိသုတ်တွင် တဏှာကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၍လွတ်မြောက်
သော စိတ်ရှိသည့်လူသည် စင်စစ်ပြီးဆုံးခြင်းရှိသူဟုဟောကြားတော်မူသည်။ သတ္တသုတ်တွင် ခန္တာငါးပါး၌ လိုချင်ခြင်း၊တပ်မက်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်းကို ခန္တာငါးပါး၌ငြိကပ်တတ်သောကြောင့်
သတ္တ၀ါဟုခေါ်ဆိုကြောင်း၊ ထိုတရားတို့တွင်လိုချင်တပ်မက် နှစ်သက်ငြိကပ်ခြင်းဟူသော
ဤသို့အားဖြင့် မြောက်များစွာသောသုတ်များတွင် တဏှာကုန်ခန်းခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းဟောကြားတော်မူသည်။မြောက်များလှစွာသောသုတ်များတွင် ရာဂ၊ ဒေါသ၊မောဟတို့ကိုပယ်ဖျောက်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဗလသုတ်တွင် ရာဂ၊ဒေါသ၊မောဟ
ကင်းပျောက်ခြင်းလျှင် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ဟုဆိုအပ်၏ဟု မိန့်ဆိုသည်။ ဒုတိယအညတရဘိက္ခသုတ်တွင် ရာဂ၊ဒေါသ မောဟတို့ကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းဟူသည် နိဗ္ဗာန်ဓာတ်၏အမည်ဟုဟောကြားတော်မူသည်။ အချို့သုတ်များတွင်ကိလေသာတရားများမှ လွတ်မြောက်မှုကို ဟောကြားတော်မူသည်။ စူဠအဿပူရသုတ်တွင် အတွင်းဓာတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရှိသူသည် စိတ်၏လွတ်မြောက်မှု၊ ပညာ၏လွတ်မြောက်မှုကို မျက်မှောက်ပြု၍ အာသဝေါတရား
ကုန်ခမ်းခြင်းကြောင့်ကိလေသာ ငြိမ်းအေးသူဖြစ်၏ဟုဟောကြားတော်မှုခဲ့သည်။ ကိလေသာ
၁၀ပါးဟူသည်မှာ..လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဌိ ၊၀ိစိကိစ္ဆာ ၊ထိန၊ဥဒ္ဓစ္စ၊ အဟိရိက၊ အနောတ္တပ္ပတို့ပင်ဖြစ်သည်။
အာသဝေါတရားလေးပါးဆိုသည်မှာ ကာမာသ၀၊ ဘ၀ါသ၀၊ ဒိဋ္ဌာသ၀၊ အ၀ိဇ္ဇာသ၀တို့ပင်ဖြစ်သည်။နာဂိတသုတ်(အဂုင်္တ္တရနိကာသ) တွင်မြတ်စွာဘုရားသည်ကာမကုန်တို့မှ လွတ်မြောက်မှုချမ်းသာ၊ ကိလေသာဆိတ်သုန်းမှုချမ်းသာ၊ငြိမ်းအေးမှုချမ်းသာ၊ အမှန်သိမြင်မှုချမ်းသာတို့ကိုအလိုရှိတိုင်း
ခံစားနိုင်သည်။ ထိုသို့ရယူမခံစားနိုင်သူတို့သာ ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သောချမ်းသာ၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း ချမ်းသာ၊ လာဘ်ရခြင်း၊ အပူဇော်ခံရခြင်း၊ ဂုဏ်သတင်းကြီးခြင်းချမ်းသာတို့ကို သာယာကြကုန်သည်ဟု ဟောကြားတော်မှုသည်။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 16:41 No comments:
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၏နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သည် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးတိုင်းမဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်သို့ လျင်မြန်စွာရောက်ရပါလို၏ မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏
ဟုဆုတောင်းလေ့ရှိကြသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဤကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်ကုိုမြတ် နိုးတောင့်တ
ကြသည်။ယေဘူယျအားဖြင့််နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည် မိမိတို့လက်ရှိခံစားနေရသည့် ချမ်းသာခြင်းများထက်သာလွန်ကြောင်းသိထားကြ၏၊ တွေ့ကြုံခံစားနေရသည့် ဒုက္ခဆင်းရဲ
မြတ်စွာဘုရား ပထမဦးဆုံးဟောကြားတော်မှုသောဓမ္မစက္ကပ၀တ္တနသုတ်တွင် နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့် သစ္စာလေးပါးတရားအကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။
ဥပါဒန်နှင့်တကွဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါးသည်ဒုက္ခအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုဒုက္ခတို့သည်စွဲလမ်း
ခြင်းတဏှာကြောင့်ဖြစ်သည်။စွဲလမ်းခြင်းတဏှာဆိုသည်မှာ ကာမဂုဏ်တို့ကို စွဲလမ်းသောကာမတဏှာ၊ ဘ၀ကိုစွဲလမ်းသော ဘ၀တဏှာ၊ ဘ၀ပြတ်စဲလိုသောဝိဘ၀တဏှာဟူသော တဏှာသုံးမျိုးတို့ ဖြစ်သည်။
ယင်းတို့ကို အမှန်အတိုင်းသိရှိရန် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတည်းဟူသော မှန်ကန်သည့်လမ်းစဉ်ကို
ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပါက ထိုစွဲလမ်းသော သမုဒယသစ္စာတဏှာတို့အကြွင်းမဲ့
ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီး နိရောဓသစ္စာတည်းဟူသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို မျက်မှောက်ပြုခံစားနိုင်ကြမည်
ဖြစ်ကြောင်းဟောကြားလမ်းညွှန်တော်မှုခဲ့သည်။ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင် “အိုတဏှာတည်းဟူသော လက်သမား၊ သင့်ကိုငါသိပြီ၊ နောက်ထပ်ဘ၀ခန္ဓာအိမ်ကို တည်ဆောက်ခွင့်မပြုတော့”ဟုကျူးရင့်တော်မူခဲ့သည်။
ဤသို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် တရားတိုင်းသည်ဒုက္ခအကြောင်း၊ ဒုက္ခဖြစ်ရသည့်အကြောင်း၊ ဒုက္ခ၏လွတ်မြောက်ရာ နည်းလမ်းအကြောင်းနှင့်် ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်းတို့ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် သတ္တ၀ါတို့၏ အဇ္ဈတ္တသန္တာန်အလိုက်
ဟောကြားဆုံးမတော်မှုခဲ့သည်။ သံယုတ္တနိကာယ် အသင်္ခတသံယုတ်တွင် ပရိယာယ်ဝေါဟာရ
၃၃ ပုဒ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်နှင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြောင်းတရားတို့ကိုဟောကြားတော်မူထားသည်။
နိဗ္ဗာန်ဆိုသည်မှာ မပြုပြင်အပ်သော အသင်္ခတတရားဖြစ်သည်။ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့၏
ကုန်ရာသည် နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည်။ တဏှာကင်းရာ၊ အာသဝေါတရာကင်းရာ ၊ဘေးကင်းရာ၊ ရာဂကင်းရာ၊ လွတ်မြောက်ရာတို့သည်နိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဗောဓိပက္ခိယတရား ၃ရပါးသည်
အသင်္ခတဓာတ်ဟူသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သည့်လမ်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူသည်။ ဤသို့အားဖြင့် ပရိယာယ်ဝေါဟာရများအသုံးပြုကာ ဟောကြားတော်မူသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ထားရန် လိုအပ်သည်။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 14:22 No comments:
ဟီရိသြတ္တပ္ပ တရားနှစ်ပါး၏ နက်နဲမှုကိုမြတ်စွာဘုရားသည် အလေးအနက်ထား၍ဟောကြားခဲ့ပါ၏။
ဤတရားနှစ်ပါးကို ကမ္ဘာစောင့်တရား ဟုလည်းခေါ်၏။
ဤတရားနှစ်ပါးသည် လောကကြီးအား စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသဖြင့်၎င်းတရားနှစ်ပါး ကိုလောကပါလတရားဟုလည်းခေါ်ဆိုကြ၏။
ဟီရိ သြတ္တပ္ပ သမ္ပန္နာ၊
သန္တော သပ္ပုရိသာ လောကေ၊
ဒေ၀ ဓမ္မာတိ ၀ုစ္စရေ။
ဟီရိ သြတ္တပ္ပ သမ္ပန္နာ =ဟီရိတရား၊ သြတ္တပ္ပတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံကုန်သည်ဖြစ်၍-အရှက်အကြောက်နှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံကုန်သည်ဖြစ်၍-၊
သုက္ကဓမ္မ သမာဟိတာ။ =ဖြူစင်သော ကုသိုလ်တရားကိုဆောက်တည်ကုန်သော၊
သန္တော =ကိုယ်နှုတ်နှလုံး အေးချမ်း ငြိမ်းသက်ကုန်သော
ဒေ၀ ဓမ္မာတိ =နတ်တို့၌ ဖြစ်အံ့သော အကြောင်းတရားရှိကုန်၏ဟု
၀ုစ္စရေ = ဆိုအပ်ကုန်၏။
အရှက်အကြောက်တရားနှင့်ပြည့်စုံသည့်ကုသိုလ်တရားနှင့်ပြည့်စုံသော ကိုယ်နှုတ်နှလုံးအေးချမ်းငြိမ်သက်မှုရှိသည့် သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုနတ်တို့၌ဖြစ်အံ့သော အကြောင်းရှိကြ
ကုန်၍ ဒေ၀ဓမ္မ ဟုခေါ်ဆို၏။
ဟီရိသည် အရှက်ရှိခြင်းဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရရှိ၏။ ဤအဓိပ္ပာယ်မှာလူသည်--
♦ ကာယကံမြောက် မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ခြင်း၊
♦ ၀စီကံမြောက် မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ခြင်း၊
♦ မနောကံမြောက် မကောင်းမှုပြုရမည်ကိုရှက်ခြင်း၊
ဟီရိသည်မကောင်းမှုကို ရွံ့ရှာစက်ဆုပ်ခြင်း လက္ခဏာရှိ၏။ အရှက်ရှိသူသည်မကောင်းမှုကို မစင်ပုပ်ကဲ့သို့ ရွံ့ရှာစပ်ဆုပ်၏။ အရှက်ရှိသူသည်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော သဘောရှိ၏။ အတွင်းစိတ် အဇ္ဇုတ္တ္က၌ ဟီရိတရား- အရှက်တရား ကိန်းအောင်းနေသူသည် မကောင်းမှုဒုစရိုက်အားလုံးကို ရွံရှာစက်ဆုပ်၏။
မည်သူ့တစ်စုံတရာ၏ တိုက်တွန်းမှုမပါဘဲ တစ်ခုခုကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်၍ မဟုတ်ဘဲ မိမိဘာသာမိမိအကုသိုလ်တရားဟူသမျှကုိရှက်တတ်သော သဘောသဘာဝရှိ၏။ ရိုသေထိုက်သူကိုရိုသေ၏၊
ရိုသေထိုက်သူ၏ စကားကိုရှေးရှုနာခံတတ်သော သဘောရှိ၏။ ဤသည်ကို ဟီရိ အရှက်ရှိသည်ဟုခေါ်ပါ၏။
သြတ္တပ္ပဟူသည်မှာ ကြောက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။ သြတ္တပ္ပကြောက်ခြင်းဟူသော အဓိပ္ပာယ်မှာ---
♦ ကာယကံမြောက် မကောင်းမှုပြုရမည်ကို ကြောက်ခြင်း။
♦ ၀စီကံမြောက် မကောင်းမှုပြုရမည်ကို ကြောက်ခြင်း။
♦ မနောကံမြောက်မကောင်းမှုပြုရမည်ကို ကြောက်ခြင်းတို့ဖြစ်၏။
သြတ္တပ္ပသည် မကောင်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သည့်လက္ခဏာရှိ၏။ မည်ကဲ့သို့ ထိတ်လန့်သနည်းဟုဆိုပါက အချမ်းကိုလိုသူသည် အပူကိုကြောက်သကဲ့သို့ မကောင်းမှုဟုဆိုပါက ကြောက်ရွံ့
ထိတ်လန့်၏။သြတ္တပ္ပတရားသည် အပြင်အပ ဗဟိဒ္ဓသဏ္ဌာန်ကို အကြောင်းပြု၍ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ အကြောက်တရားသည် သူတစ်ပါးဟူသောအပြင်လောကကြီးကို အကြီးအမှုးထား၍ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ါသည်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကို ခိုးပါကထောင်ကျမည်၊ ငရဲကြီးမည်။ ထောင်ကျခံရမည်ကိုကြောက်ခြင်းစသည့်
ဗဟိဒ္ဓသဏ္ဌာန်များကို အကြောင်းပြု၍ ကြောက်ခြင်းဖြစ်၏။
ဤအရှက်အကြောက် တရားနှစ်ပါးလုံးတို့သည် အရှက်အကြောက်ရှိသူ၏စိတ်ကို အမြဲထာဝရလွှမ်းမိုး အုပ်စိုး၍ထား၏။မကောင်းမှု ဒုစရိုက်များကိုပြုလုပ် ကျုးလွန်ခွင့်မရ။ပြုလုပ်ချင်စိတ်များကို ဟန့်တားပိတ်ပင်ထိန်းသိမ်း၍ ထားတက်သောကြောင့် ...မိမိတို့တတွေသည်လည်း..ဟိရိသြတ္တပ္ပတရားကို
လက်ကိုင်ထား၍...ဘာဝနာကောင်းမှု၊ သီလကောင်းမှုတို့ဖြင့် ရှေ့ဆက်ရမည့်ဘ၀လမ်းကိုပျော်ပျော်ရွင်ရွင် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လျှောက်လှမ်းကြပါစို့လို့
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 14:08 No comments:
ဘာမဆို ပြောရဲ၊ ဘာမဆိုပြုရဲပါတယ်။
အပြောမှား ၊ အပြုမှားတွေချည်းပဲ
အပြောမှား ၊ အပြုမှားတွေကြောင့်
သူရတာ မဟုတ်ယ သူ့ကံရှိမှ သူရတာ၊
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 13:06 No comments:
အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာလား၊ အရှုပ်တွေလုပ်နေတာလား....
ကိုယ်လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်တွေလုပ်နေတာက
အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာတွေ မလုပ်ဘဲ အလုပ်မဟုတ်ပါဘဲနဲ့
ဘ၀သံသရာ ကိုယ့်နောက်မပါမယ့် အလုပ်တွေချည်း လုပ်နေတာက
( အရှင်အာစာရ လင်္ကာရ)
ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ ပူလောင်မှု၊ ငြိမ်းအေးမှုကို
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 10:43 No comments:
ဗုဒ္ဓအလိုကျ ဒါနပြုနည်းဖြစ်အောင် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်လာ သပ္ပုရိသဒါနသုတ်ကို လေ့လာကြရမည်။ မြန်မာပြန်လျှင်
သူတော်ကောင်းတို့ ပြုသောဒါနဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အင်္ဂါငါးချက်ရှိသည် ယင်းတို့မှာ...
မိမိအလှူအတွက် သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်ြခင်းတို့ ဖြစ်ပေသည်။
ဆောင်ပုဒ်။ သဒ္ဓါကြည်ညို ရိုသေလှစွာ
ဒါနတောဘောဂ၀ါ= ဟူသော ဒေသနာအတိုင်းဒါနပြုသူမှန်သမျှ ဖြစ်ရာဘ၀တွင် ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများမည်ကား ဧကန်ပင်ဖြစ်၏။ ဧကန်ပင်ဖြစ်၏ ဖော်ပြပါအင်္ဂါငါးချက်နှင့်ညီအောင် လှူဒါန်းနိုင်လျှင် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပေါများချမ်းသာ
သည့်အပြင် အကျိုးထူးငါးမျိုးကိုလည်း ပိုမိုရနိုင်ပေသည်။
သဒ္ဒါကြည်ရွှင် ၊ လှူဒါန်းလျှင်
ရတနာသုံးပါးကိုကြည်ညိုသော သဒ္ဒါဓာတ်များများဖြင့် ပေးလှူခဲ့လျှင်ဖြစ်ရာဘ၀တွင် ချမ်းသာသည့်အပြင်
ရုပ်ရည်ချောမောခြင်း ဟူသောအကျိုးထူးတစ်ခုကို ပိုမိုခံစားရပေသည်။ ယခုခေတ်တွင်လည်း တစ်ချို့သူဌေးများ၊
ပစ္စည်းဥစ္စာလည်း ပေါများခ်ျးသာသည်။ ရုပ်လည်းချောမောလှပေသည်။
တစ်ချို့သူဌေးများကား ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာ သော်လည်းအရုပ်ဆိုးအကျဉ်းတန်ကြသည်။ ဤသည်ယခင်ဘ၀
ဒါနပြုကြစဉ်အခါတုန်းက ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုခြင်း၊မကြည်ညိုခြင်းဟူသောအချက်ကကတ္တား ခြားပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ရိုရိုသေသေလှူဒါန်းလျှင် ပစ္စည်းဥစ္စာ ပေါများချမ်းသာသည့်အပြင်သြဇာအာဏာညောင်းခြင်း၊
ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းဟူသော အကျိုးထူးကို ပိုမိုရရှိသည်။ ဇေတ၀န်ကျောင်း ဒကာ၊ အနာသပိဏ်ဟုဆိုလျှင်
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းလိုလိုသိသည်။ ပုဗ္ဗောရုံကျောင်း အမ၀ိသာခါဆိုလျှင်လည်း ထိုနည်းတူပင်။
တကယ်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်သည် အိမ်ထောင်သည်များဖြစ်ကြ၏။ ဇေတ၀န်ကျောင်းကို အနာသပိဏ်ရော
သူ့ဇနီးရော နှစ်ယောက်လုံးက လှူဒါန်းကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပုဗ္ဗောရုံကျောင်းတိုက်ကိုလည်း ၀ိသာခါရော၊ သူ့ခင်ပွန်းရော နှစ်ယောက်စလုံး လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်သာဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ပါလျှက်နှစ်ပေါင်း ၂၅၄၆နှစ်ကျော်လာသည်အထိ အနာသပိဏ်သူဌေးနှင့် ၀ိသာခါတို့၏နာမည်သာလျှင်ထင်ရှားလျှက်ဂှိပြီး သူတို့ပါရမီဖြည့်ဖက်များနာမည်ကား အဘယ်ကြောင့်လူသိနည်းရသနည်း။
အဖြေကား ဒါနပြုကြစဉ်အခါတုန်းက ၀ိသာခါနှင့် အနာသပိဏ်တို့က သက္ကစ္စဒါနအားကောင်းခဲ့ပြီး သူတို့ပါရမီဖြည့်ဖက်များက သက္ကစ္စဒါနအားမကောင်းခဲ့သောကြောင့်ပါတည်း။ အနာသပိတ်သူဌေး၏ ဇနီးသည်အမည်ကို ပုညလက္ခဏဒေ၀ီဟုခေါ်၍ ၀ိသာခါ၏ခင်ပွန်းအမည်ကို ပုဏ္ဏာဝပုန ဟုခေါ်ပါသည်။။။။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 12:03 No comments:
'လှုမှုရေးရာ အဖြာဖြာ၌ ပညာသည် ပဓာနမကျ၊ ခံစားမှုသည်သာ ပဓာနကျ၏၊ လောကုတ္တရာရေးရာ အဖြာဖြာ၌ကား ခံစားမှုသည်ပဓာနမကျ၊ ပညာသည်သာ ပဓာနကျ၏' ဟူ၍ အဆိုအမိန့်ရှိလေရာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ
ပုထုဇဉ်တို့သည် အချို့သော ကိစ္စများ၌မလုပ်သင့်မှန်းသိပါလျှက် မခံချင်သောစိတ် ၊ခံစားချက် ပြင်းထန်သောစိတ်ဖြင့်ဇွတ်လုပ်တတ်ကြ၏ ။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟု သဘောထားတတ်ကြ၏။ ဤသည်မှာပညာပါရမီ မရင့်သေးသူတို့၏ ခံယူချက်နိယာမတည်း
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 15:40 No comments:
ကိစ္စမများ၊ အအိပ်ပါး၍ ၊စကားလည်းနဲ၊ ဖော်ရှောင်
လွှဲလျက်၊ မတွဲမိတ်ဆိုး၊ လိုဆိုးကင်းလတ်၊ ပြီးမသတ်ဘဲ
မရပ်မနား၊ ရှုမှတ်ငြား၊ တရားမြန်မြန်ရမည်တည်း။။ ( ဒီ ၂။ ၆၆)
ကိစ္စထွေပြား ၊အအိပ်များ၍၊ စကားလည်းပြော၊
ဖော်မက်မောလျက်၊ ဆိုးသောမိတ်ရှိ၊ လိုဆိုးပြည့်၍၊
မိမိတရား၊ မပြီးငြားဘဲ၊ စိတ်အားလက်လျှော့၊
အိမ်ပြန်ပေါ့၊ ဘယ်တော့ တရားရမည်နည်း။။
ယုံကြည်ကျန်းမာ၊ ဖြောင့်မှန်စွာ၊ ပညာ ၀ီရိယ။
ယောဂီအင်္ဂါ၊ ဤငါးဖြာ၊ သေချာမှတ်ပါကြ။
အင်္ဂါငါးပါး၊ ပြည့်စုံငြား၊ တရားသေချာရ။
အင်္ဂါငါးပါး၊ မစုံငြား၊ တရားမှန်မရ။
မေတ္တာ =သတ္တ၀ါတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို လိုလားသောစိတ်။
ကရုဏာ =ဆင်းရဲသော သတ္တ၀ါကိုသနားကြင်နာခြင်း။
မုဒိတာ =သူတပါး ကြီးပွားချမ်းသာသည်ကို ၀မ်းသာခြင်း။
ဥပေက္ခာ=မိမိကံအလျှောက် ဖြစ်ကြရတာပဲဟု အလယ်အလတ်သဘောထားခြင်း။
အဗျာပဇ္ဈာ ဟောန္တု= စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေ။
အနီဃာ ဟောန္တု= မိမိကိုယ်ကို ချမ်းသာစွာဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ (မေတ္တာပို့)
ဒုက္ခာ မုစ္စန္တု =ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းကြပါစေ။။ (ဂရုဏာပို့)
ယထာလဒ္ဓသမ္ပတ္တိတော မာဝိဂစ္ဆ န္တု =ရပြီးသားစည်းစိမ် ချမ်းသာမှ မကင်းကွာ မယုတ်လျော့ကြပါစေနှင့်။ (မုဒိတာပို့)
ကမ္မဿကာ =မိမိ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှုသည်သာလျှင် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိကြပါတကား။
မေတ္တာစိတ်သက်၊ ဆောင်ရွှက်ချစ်ကြဉ်၊ ခင်မင်နှုတ်ချို ၊လိုလျှင်ဖိတ်ထား၊
တတ်အားလှူစေ၊ ၀တ်အားထွေ၊ ပြုလေ ဒါယကာ၊
သေစာသောက်စား၊ လမ်းသွားခါမဲ့၊ ရှုငဲ့သဘင်၊ ပျော်ရွှင်အန်လောင်း၊
မကောင်းမိတ်ဖျင်း၊ ပျင်းရိခြင်းကား၊ ယိုယွင်းဥစ္စာပျက်ကြောင်းတည်း။။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 12:29 No comments:
ဘ၀ပေါင်းစု၊ သောင်းအထုတွင်၊ ကောင်းပြုကောင်းပြော၊ ကောင်းသဘောနှင့်၊ ကောင်းသောနှလုံး၊ တဖြောင့်သုံး၍
သက်လုံးစင်ဖြူ ၊ထိုသည့်သူကား၊ "ငါမှုကောင်းမှု၊ အစုစုကို၊ ဆည်းပြုခဲ့မိ၊ ရတော်ဘိ"ဟု၊ မိမိပြုမှု၊ သန့်စင်ဖြူ၍၊ ပြစ်မြူမနှော၊ ဤသဘောကို၊တွေးတောမိတိုင်း၊ ပီတိလှိုင်းဖြင့်၊ ယှက်သိုင်းရစ်လည်၊ ချမ်းမြေ့ကြည်လျှက်၊ ဤသည်ဘ၀၊ နောင်ဘ၀နှင့် ဘ၀ဆက်ဆက်သံသာစက်တွင်၊ စိတ်လက်ကြည်သာ ရုပ်လန်းဖြာ၍ ၊ ချမ်းသာကောင်းကျိုး ဒီရေတိုးသို့၊ ဖွဲ့ဖြိုးကြီးကျယ် ပွင့်လန်းကြွယ်သည်၊ ထက်ဝယ်နတ်ထံစံဖို့တည်း။။။
ဘ၀စုစု၊သံသာထုတွင်၊ အပြုအပြော ၊သဘောမဖြူ၊ ထိုသည့်သူကား၊ "ငါမှုမကောင်း၊ မှုအပေါင်းကို၊ ရင့်ညောင်းကြာရှည်၊ ပြုမိသည်မှာ၊မှားခဲ့စွာ" ဟု၊ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြု၊ ပြစ်သောင်ထု၏၊ ညစ်ကျုဖြစ်တုံ၊ အိုးမလုံက၊ အအုံပွင့်ရာ၊ ဆိုပမာသို့၊ မသာနှလုံး၊မရွှင်ပြုံးနိုင် ။သောကလှိုင်လျက်၊ သည်းဆိုင်ကြွေမျှ ၊ညှိုးခွေလျ၍၊ စိတ်ကမလန်း၊ ရင်ညှိုးနွမ်းလျက်၊ ပင်ပန်းရိရှား၊ အောက်လမ်းသွားသည်၊ လေးပါးအပါယ်ဖြောင့်ဖြောင့်တည်း။။
သန့်ရှင်းကြည်လင်၊ ကြေးမုံပြင်ဝယ်၊ သင့်သွင်ရူပ၊ လှမလှကို၊ နေ့ညမရွှေး၊ ကြည့်စစ်ဆေး၍
၊ယင်ချေးမှဲ့ပြောက်၊ ၀က်ခြံပေါက်နှင့်၊ ညှင်းပြောက်တင်းတိတ်၊ ဖုအကျိတ်ကို၊ ဆေးသိပ်ပယ်ရှား၊ ပမာလားသို့၊
မြတ်ဖျားဗုဒ္ဓ၊ ဟောညွှန်ပြသည့်၊ ဓမ္မကြည်လင်၊ ကြေးမုံပြင်ဝယ်၊ သင့်သွင်မန စိတ်အလှကို၊ နေ့ညမရွေး၊ တင်စစ်ဆေးလော့၊ ညစ်ကြေးကိလေတွေ့ခဲ့ပေသော်၊ ခြောက်ထွေနည်းဖြင့်၊ ပျောက်စေလွင့်မှ မလင့်မကြာ၊ သင့်ခန္ဓာသည်၊ ချမ်းသာဖုံးလိမ့်မှန်စွာတည်း။
ပညာကင်းဘိ၊ မနှိုင်းညှိဘဲ၊ ဇာတိပုသ။ မဟတ္တဖြင့်၊မာနအရာ ၊ကဲမိုးစွာလျက်၊ ငါသာမင်းဟူ၊ပဇာတူဟု၊ အယူမောက်ကြွား၊ မထောင်လွှားနှင့်၊ တောင်ကားမြင့်ကြီး၊ မီးကားရှိန်ပူ ၊သံမူမာကျော၊ ဘက်မဲ့သောဟု ၊ရေကြော
သတ္တိ၊ မသိ၍သာ၊ ကြိမ်းပရာသို့၊ပမာပုံမှီး၊ မာန်မှုကြီး၍၊ တောင်မီးသံလား၊ မကြုံဝါးလင့် ၊ရေအားကြုံတွေ့၊ ၀ဲဟုန်မွှေ၍၊ တိုက်ဝှေ့သောခါ၊ မကြာမတင်၊ အလျင်သဖြင့်၊ တောင်မြင့်မီးပူ၊သံမာမူလည်း ၊မြူသာဖြစ်၍ စင်စစ်ကြွေမွ၊ ပျောက်ပျက်ရ၏။။ (မဃဒေ၀၊၂၀၃)
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 12:15 No comments:
လူတွေလူတွေ တူရာစုပြီး အုပ်စုခွဲခြား စိစစ် ကြည့်လိုက် ရင်တော့များများစားစားမရှိပါဘူး၊တိတိကျကျရေတွက်ကြည့်လိုက်ရင် လူလေးမျိုးလေးစားပဲ ရှိပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဆိုပါစို့-
၄။ အလွန်တရာ ကံဆိုးရှာလွန်း
ကံအလွန်ကောင်းသူများကတော့ဓမ္မဆိုတဲ့တရားရဲ့အဆုံးအမကို နားဝင်လက်ခံယုံကြည်သူတွေပဲ၊ သူတို့ဟာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေ ကင်းစင်နည်းပါးပြီး လောကကောင်းကျိုး၊လောကလူသားများရဲ့အေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသာရှေးရှုလုပ်ဆောင်ကြတဲ့ လူစားတွေ။ တရားနဲ့အညီနေထိုင်တယ်၊ တရားနဲ့အညီ ကျင့်သုံးတယ်။ တရားရဲ့ အဆုံးအမတွေကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အတွက် မတရားတာမလုပ်ဘူး၊ မသမာမှုကိုရှောင်ကြဉ်တယ်။ မမှန်တာမလုပ်ဘူး၊ မဟုတ်တာကိုမပြောဘူး၊ သူတစ်ဖက်သားကို တမင်ထိခိုက်နစ်နာအောင် မပြုလုပ်ဘူး။သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောကကောင်းကျိုး သယ်ပိုးဖို့ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အပြုအမူတွေက နူးညံ့ပျော့ပျောင်းတယ်။ မေတ္တာဓာတ်ပါတော့အေးမြတယ်။ သူက လူတစ်ဖက်သားကို ကြင်နာမှု၊ စာနာမှု၊ ငဲ့ညှာမှုနဲ့သာဆက်ဆံတယ်။ တိုးတက်အောင် ကူညီမှု၊ ဖြည့်ဆည်းမှု၊ အားပေးမှုတွေနဲ့လက်တွဲတယ်။
သူတို့ဟာ လုပ်သမျှ အောင်မြင်ခဲ့တာပဲ။သူတို့က ကံအကောင်းဆုံး လူစားတွေ။ဒုတိယ ကံကောင်းသူအမျိုးအစား
လူတွေက တရားဓမ္မကို သိသူ၊ သိကြပါတယ်။ ကြားဖူးနားဝ ရှိသူလည်းရှိကြပါတယ်။ သူတို့က တရားဓမ္မကို
သိပေမယ့် ကျင့်တော့ အပြည့်အဝမကျင့်နိုင်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖောက်ဖျက်ကြသလား ဆိုပြန်တော့လည်း
မဖောက်ဖျက်ကြ၊ မကျူးလွန်ကြ။သူတို့က ဝါရိတ္တသီလ၊ စာရိတ္တသီလတို့ကိုတော့ အလေးအနက်ထားတယ်။
မသတ်ဘူး။မခိုးဘူး၊ မဝှက်ဘူး၊ မလုယက်ဘူး။အရက်သေစာ မသောက်စားပါဘူး။မုသားမပြော။ သူများသားမယားကို မပြစ်မှား။ဝေနေယျာအများအပေါ် မေတ္တာထားပါတယ်။
ဒီလူတွေဟာ ကံကောင်းတတ်ကြတယ်။ ဘဝမှာဆိုးဆိုးရွားရွားပြင်းပြင်းထန်ထန် လိမ့်လဲသွားအောင် မကြုံကြ
ရပါ။ သင့်တင့်မျှတစွာ အေးချမ်းသာယာစွာ နေရတယ်။တတိယလူစု။ကံဆိုးသူတွေ။
လူပေ၊ လူတေ၊ လူပွေ။ လောကကြီးမှာ ပျော်သလိုနေမယ်။ သူတို့မှာဘုရားမသိ၊ တရားမရှိ၊ သံဃာမရှိ။
သူထင်ရာသူလုပ်တယ်။ သူ့စိတ်နဲ့တွေ့ရင် ကောင်းတယ်။ သူမထင်ရင်မထင်သလို ပြုမူတယ်။ မူမရှိဘူး၊
တရားဓမ္မဆိုတာ ကျင့်သုံးလိုက်နာစရာလို့ နားမလည်ဘူး။ ဓမ္မနဲ့ ကြာလေဝေးတော့ အဓမ္မသမားတွေ ဖြစ်လာ
တယ်။ ခက်ထန်လာတယ်၊ ကြမ်းတမ်းလာတယ်။ရက်စက်ဖို့လည်းဝန်မလေး။တွေးကြည့်ရင်တော့ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို စိုက်ခဲ့ကြလို့ သူတို့ဘဝ အခါးသီးတွေ စားနေကြရတာ။ ဘဝရဲ့ ခါးသီး
ကြမ်းရှမှုတွေကြောင့် သူတို့က ပိုမိုယုတ်မာပက်စက် လာကြပြန်ပါရော။
တရားဓမ္မ လမ်းမှန်ပြမယ့်သူနဲ့ မနီးသမျှ ဒီလူစားတွေရဲ့ဘဝဟာ ရေဝေးကြာလို နွမ်းသွေ့ကြရရှာမှာပဲ။ ကြက်
ဟင်းခါးပင်စိုက်ပြီး စပျစ်သီးစားချင်လို့တော့ဘယ်ရမှာလဲ။ မိမိစိုက်တာနဲ့အညီ ဘယ်သူမဆို ကိုယ်စိုက်ပျိုးတဲ့
အသီးကိုသာ ဆွတ်ခူးကြရစမြဲ မဟုတ်ပါလား။လူဖြစ်လာရ လူ့ဘဝ၊ကံအဆိုးဆုံးပေတာတုံးတဲ့ လူသားတွေ ရှိပေသေးတယ်။ မနုဿတ္တဘာဝေါ ဒုလ္လဘောဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်။ လူ့ဘဝဟာ ရခဲတယ်။ လူ့အဖြစ်ဟာရဖို့ရာတော်တော်ခဲယဉ်းတယ်။ လူဖြစ်လာရင် လူ့လောကကောင်းကျိုးကိုတော့ ပြုသင့်
တာပေါ့။ အဲဒါ ကုသိုလ်ခေါ်တယ်။ကောင်းမှုလေ။မပြုချင်လည်းနေ။ဖျက်ဆီးရင်တော့ အကုသိုလ်
ဆိုက်ပြီ။လောကကောင်းကျိုးကို အလုံးစုံပျက်သုဉ်းသွားအောင်ချေမှုန်းတိုက်ဖျက်ပစ်မယ် ကြုံးဝါးပြီး လုံးလုံးကြီးမှားပြီဆိုရင်တော့ လူဖြစ်လာတဲ့ အတိတ်ကံကို မိမိကိုယ်တိုင် အမြစ်ကိုတူးဖြိုပြီး
မိုက်မဲတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ လွဲသွားပြီ။ပင်စည်လဲတော့မည်။ အကိုင်းအခက်တွေ ထင်းဖြစ်ရတော့မည်။
အရင်းလဲရင် အဖျားထင်းဖြစ်ဆိုတဲ့ စကားပုံဆိုရိုးစကားဟာ ဒီလိုလူစားတွေအတွက် ထားခဲ့တာ။ ကိုယ်
ခိုနားတဲ့အရိပ်ရဲ့ အခက်ကို ချိုးပြီဆိုမှတော့ နေထိုးပြီပေါ့။ အရိပ်အကိုင်းကို ခုတ်ချင်တာကိုး။ ဘဝဟာ
ပူလောင်ရမှာပဲ။မိုက်မဲမှုရဲ့ ဒဏ်ကို ဘယ်သူမပြုမိမိမှု ခံစားရပေလိမ့်မယ်။ လောကရှိ
-ဗဟုဇနသုခါယ၊ လူအများရဲ့ချမ်းသာရေးကို ဆောင်ကြဉ်းပေးရန်တို့ဇြစ်တယ်။
ဖြစ်ခဲ့ကြပြီ၊ ဖြစ်နေကြဆဲ။ လူတချို့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်း အတ္တဆန္ဒကြီးမားပြင်းထန်မှုကြောင့် ဘာမဆို
အရာရာကို အကောင်းတစ်ခုမှမမြင်၊လုံးဝဥဿုံ ပျက်သုဉ်းရေးသို့သာနှစ်ပေါင်းများစွာ ခေါင်းမာမာနဲ့
ကလျာဏံ ဝါ ပါပကံ ဝါ
အကြင်၊ ကောင်းသော ကံကိုပြုပါကကောင်းကျိုးရ၏။ မကောင်းသောကံကိုပြုပါကမကောင်းကျိုးရ၏
လို့ ဘုရားရှင်က အဘိဏှသုတ္တန်မှာဟောကြားတော်မူတယ်။ကောင်းကျိုးပြုမှ ကောင်းကျိုးရပေမယ်။
နိုင်ငံတကာ အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင် အကောင်းအဆိုး၊ အကြောင်းအကျိုးတွေ မြင်ရ
ပါမယ်။ ကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကို လုပ်မှ ကောင်းကျိုးမုချရမယ်။မကောင်းတဲ့ အကုသိုလ် ဒုစရိုက်
တရားတွေကို စွန့်ပယ်ဖယ်ရှားရပါမယ်။ အချိန်တန်ပြီ။လောဘမလွန်ကဲစေနဲ့။ ဒေါသကို ထိန်းပါ။ အဝိဇ္ဇာ မောဟကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင် တရားဓမ္မနဲ့ နီးစပ်
ဖို့ရာ ကြိုးစားပါ။ ကံဆိုးသူဟာကံကောင်းသူ ဖြစ်လာမယ်။ ကံကောင်းသူဟာ ကံအကောင်းဆုံးလူ
ဖြစ်လာမယ်။ ကံတရားကို လူကပြုပြင်လို့ရတယ်။ ကံကိုလူက စီမံတာပါ။ ကံက လူကို ဖန်တီးစီမံတာ
က မိမိရဲ့ စေတနာအရ တုံ့ပြန်ရရှိတာ ပြောခြင်းပါ။စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းတယ်။ စေတနာမှန်
ရင် ကံမြင့်မယ်။ စေတနာချမ်းသာမှကံချမ်းသာပါလိမ့်မယ်။ လောကမှာ
လူလေးစား ရှိကြတယ်။ သင်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 12:30 1 comment:
သီလဆိုတာ ကိုယ်နှုတ်များကို၊ ကောင်းစွာထားဖို့ စောင့်ရသလေ။
ကိုယ်နှုတ်လုံလျှင် လူယဉ်ကျေးကွယ့်၊ ကောင်းကျိုးပေးမြဲ အမှန်ပေ။
စိတ်ပါလုံလျှင် ပိုလို့ကောင်းသကွယ့် ၊ ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ကျိုးစားလေ။
စိတ်ပါလုံအောင် ဘာဝနာပွားဖို့၊ မြတ်ဘုရားက မိန့်ခဲ့ပေ။
ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထား၊ ဤသုံးပါး ၊ လုံငြားချမ်းသာပေ။
ကောင်းဆိုးနှစ်တန် ကံတရားနှင့်၊ သုံးပါးရတနာယုံလျှင်လေ။
ဆိုးကံပြုရန် ရှက်ကြောက်များလို့၊ သီလတရားလုံခြုံပေ။
သီလလုံလျှင် ကြည်ရွှင်လန်းလို့၊ ၀မ်းသာအားရနှစ်သိမ့်ပေ။
နှစ်သိမ့်သောခါ ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းလို့၊ ငြိမ်းအေးချမ်းသာရသလေ။
ချမ်းသာလေဘိ ၊ သမာဓိ၊ ရ၏ဥာဏ်မြင်တွေ။
သီလခေါ်ဆို၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ပျက်စီးငြားမှု၊ စီးပွားလည်းပျက်၊
နာမည်ပျက်၍၊ ရွံ့ရှက်ကြောက်လျင်း၊ ပွဲလယ်ချဉ်း၏၊
သေခြင်းဆိုက်လတ်၊ သတိလွတ်လျက်၊ ရောက်လတ်ဒုဂ္ဂတိ၊
သီလခေါ်ဆို၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ စင်ကြယ်ငြားမှု၊ စီးပွားတိုးလျက်၊
နာမည်တက်၍၊ ရွ့ရှက်ကြောက်ကင်း၊ ပွဲလယ်ချဉ်း၏၊ သေခြင်းဆိုက်လတ်၊
သတိကပ်လျက်၊ ရောက်လတ်နတ်ဝယ်၊]ဤငါးသွယ် ၊ရဖွယ်ကောင်းကျိုးတည်း။။
မျောရရုံ ရှိတော့ ခမန်း။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 10:30 No comments:
ကံ - ကံ၏အကျိုး
၁။ သူ့ကိုသတ်ဖြတ်၊ သက်တိုတတ်၊ မသတ် အသက်ရှည်။
၂။ ညှဉ်းဆဲသူကား၊ အနာများ၊ သနား ကျန်းမာသည်။
၄။ မနာလိုမှာ၊ ခြွေရံကွာ၊ ကြည်သာ ခြွေရံစည်။
၅။ မပေးလှူက၊ မွဲပြာကျ၊ လှူမှ ပေါကြွယ်သည်။
၆။ မရိုမသေ၊ မျိုးယုတ်ချေ၊ ရိုသေ မျိုးမြတ်သည်။
၇။ မမေးမမြန်း၊ ဉာဏ်မြင်ကန်း၊ စုံစမ်း ဉာဏ်ကြီးသည်။
၈။ ဆိုးတာပြုက၊ ဆိုးတာရ၊ ကောင်းမှ ကောင်းစားသည်။
၉။ ကောင်းဆိုးနှစ်တန်၊ ကံစီမံ၊ ခံစံကြရသည်။
``မြတ်ယုတ်မျိုးရိုး ၊ တန်းခိုးထင်တိမ်၊ စည်းစိမ်သုခ၊ ရမရနှင့်၊ ရောဂါနည်းများ၊ ပိုင်းခြားခန့်တွက်၊ အသက်တိုရှည်၊ လှသည်ရှုပ၊ မလှရုပ်ပါ၊ ပညာရှိမဲ့၊ တစ်ဆယ့်လေးပါး၊ ဤအပြားလည်း၊ သိကြားပရမီသွာ၊ ဗြဟ္မာနတ်ခေါင်၊ တောတောင်မီးရေ၊ မိုးလေခပင်း၊ ဖန်ဆင်းမတတ်၊ ကမ္မဿကာ၊ မှတ်ထင်ရာသည်။´´
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 15:45 No comments:
မေတ္တာဟူသည် ချစ်ခင်မှု၊ အစိုဓာတ်၊ အစေးဓာတ်ဖြင့် စေးကပ်တတ်သောတရားဖြစ်၏၊
ထို့ကြောင့် ဆရာတို့ကမိတ်ဆွေအပေါ်၌ ဖြစ်သောတရားသည် မေတ္တာတရား သည်မေတ္တာတရားဟုဆိုကြ၏
မိတ်ဆွေဟူသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အစေးကူးသူများ၊အစေးကပ်သူမျာဖြစ်၏။ ထိုအစေးသည် 'ချစ်ခင်မှုမေတ္တာ'
အစေးဖြစ်၏။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မေတ္တာထားနိုင်မှ မိတ်ဆွေဖြစ်၏၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအစေးကူးနိုင်မှ မိတ်ဆွေဖြစ်၏။
မေတ္တာ၏ တရားကိုယ်ကားအဒေါသစေတသိတ်ဖြစ်၏။ အဒေါသစေသတိတ်နှင့် သတ္တ၀ါတစ်ဦးဦးအပေါ်ကို အာရုံပြုလျှင် ထိုစိတ်သည် စိုဖပ်ဖပ်စေးကပ်လျှက်အာရုံပြုသည်။
ဒေါသ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းပြန်အနေအထားနဲ့ကြည့်ပါက မေတ္တာ၏သဘောပေါ်လွင်၏။ ဒေါသသည်စိတ်ကိုဖျတ်ဆီးတတ်သည်။ရုပ်ကိုလည်း ဖျတ်ဆီးတတ်သည်။ အရာအားလုံးကို ဖျတ်ဆီးတတ်
သည်။ မေတ္တာကစိတ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုသည်၊ ရုပ်ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုသည်။အရာအားလုံးကိုလည်း
ကောင်းအောင်ပြုသည်။ ဒေါသက စိတ်ကိုလည်းဆိုးစေသည်၊ ရုပ်ကိုလည်းဆိုးစသည် အရာအားလုံးကိုဆိုးစေသည်။ မေတ္တာကစိတ်ကိုလည်းလှစေသည် စိတ်ကိုလည်းလှစေသည်။အရာအားလုံးကို
ဒေါသက ခက်ထန်သည်။ ကြမ်းတမ်းသည်။ပူလောင်သည်။ မေတ္တာကနူးညံ့သည်။ သိမ်မွေ့သည်၊ ပြေပြစ်သည်။
အေးချမ်းသည်၊ ဒေါသက အဖျက်သမားဖြစ်သည်၊ မေတ္တာကအပြုသမားဖြစ်သည်။ မေတ္တာသည်တစ်ပါးသူတို့၏
အကျိုးစီးပွားကို ကျင့်သည်။တစ်ပါးသူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကိုသယ်ပိုးဆောင်ရွက်သည်။
မေတ္တာပွားများသူသည် ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရ၏။ ချမ်းချမ်းသာသာနိုးရ၏၊ အိပ်မက်လှလှမြင်မက်ရ၏ ၊ လူအများချစ်ခင်၏၊ နတ်အများချစ်ခင်၏။ နတ်အများစောင့်ရှောက်၏၊ မီး၊ အဆိပ်၊လက်နက်စသည်ပြီး၏။
စိတ်တည်ကြည၊ မျက်နှာအဆင်းကြည်လင်၏။ သတိဖြင့်သေမင်းကို ရင်ဆိုင်၏။ နောင်တမလွန် ဗြဟ္မာပြည်လားရာ၏
'တစ်နေ့သုံးခါ အိုးတစ်ရာဖြင့် ချက်ကာထမင်း ကျွေးမွေးခြင်းထက် မယွင်းစင်စစ်၊ နို့တစ်ညှစ်စာကြိမ်သုံးခါမျှ၊ မေတ္တာပွားများကျိုးကြီးမားသည်၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ မိန့်ခွန်းတည်း။'
တတ်နိုင်သူတစ်ဦးက ထမင်းအိုးတစ်ရာ၊ ဟင်းအိုးတစရာဖြင့် နံနက်၊ နေ့၊ ည တစ်နေ့သုံးကြိမ်အလှူကြီးပေးလှူ၏။
ထိုမျှမတတ်နိုင်သူတစ်ဦးက '္တစကြ၀ဠာ အနန္တ၊ သတ္တ၀ါအနန္တ ကျန်းမာပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ'ဟု နွားနို့တစ်ညှစ်စာမျှ
နံနက်၊ နေ့၊ည သုံးကြိမ်မေတ္တာပို့၏။ မေတ္တာဘာဝနာပွားများ၏။ ဒါနသမားထက် မေတ္တာသမားကပိုကုသိုလ်ရသည်။
ပိုအကျိုးကြီးသည်။ (နိဒါန၀ဂသံယုတ်၊ သြက္ခာသုတ်)
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 05:39 No comments:
ရည်သန်၍ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးက အောက်ပါသြ၀ါဒကိုပေးသနားတော်မှုခဲ့ပါ
"နောင်ရင်းညီရင်း ၊နွယ်မကင်းသား၊ သားရင်းမျိုးဖော်
မေတ္တာဆက်၍၊ မဖျက်ဆီးမှု၊ ချီးမြှောက်ပါလော
မိမိကိုသူတပါးက လေးစားလိုလျှင်မိမိကအလျင်ဦးအောင် သူတစ်ပါးကိုလေးစားပါလေ။ မိမိကိုသူများက ပူဇော်စေလိုလျှင် မိမိကအရင်ဦးအောင် သူများကိုပူဇော်ပါလေ။မိမိကိုသူတပါးက ရှိခိုးကျိုးနွံစေလိုလျှင် မိမိကအလျင်ဦးအောင် သူများကိုရှိခိုးကျိုးနွံပါလေ။ မိမိမကျေနပ်သောကာယကံဝစီကံများကို အခြားလူများကလည်း ကျေနပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ကိုယ်ချင်းစာပါ။
အကောင်းကြိုက်လျှင် သူများထက်ပိုပြီးအပင်ပန်းခံရမည်ကို မကြောက်ပါနှင့်။ ဘုရားဝတ်တက်လိုစိတ်မရှိလျှင်
ပေ၍၀တ်တက်ဝတ်ကပ်ပြုပါ။ တံမြတ်လှည်းခြင်းစသော သေနာသန၀တ်များကိုပြုလုပ်လိုစိတ်မရှိလျှင် ပေ၍အဆိုပါဝတ်များကိုပြုပါ။စာအံ၊စာကျက်၊ စာကြည့်လိုစိတ်မရှိလျှင် ပေ၍စာအံ၊ စာကျက်၊စာကြည့်ကျင့်ကို ကျင့်ပါ။အချုပ်အားဖြင့် ကုသိုလ်ရေးရာအလုပ်ဟူသမျှကိုလုပ်လို စိတ်မရှိသော်လည်းပေ၍လုပ်ပါလေ။
(ကျေးဇူးတော်ရှင်ပထမ မစိုးရိမ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး)
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 10:38 No comments:
အားမှလုပ်မယ် အားမှလုပ်မယ်ဆိုပြီး အားရက်ကိုစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
"ခေါင်း"ထဲဝင်တဲ့နေ့ပဲ။ ဒီလိုဖြစ်ရင် အားရက်ကို မစောင့်နဲ့တော့။
ဒီကနေ့သည် ကိုယ့်အတွက်မနက်ဖြန်သည်ကို့်အတွက် မဟုတ်ဘူးလေ။အနာဂတ်ဆိုတာ
မသေချာဘူးတဲ့။ မတော်ကွေးသောလက်မဆန့်ခင်၊ ဆန့်သောလက်မကွေးခင်
ဆိုသလို ညသေသွား ဘယ်နှယ်လုပ်မလဲ ကိုယ်ကျိုးမနည်းဘူးလား။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 10:31 No comments:
“ မိမိ ကိုယ်ပိုင် စာရိတ္တ အရှိ စာရင်း ”
- ကိုယ့် ကတိကို တည်အောင်ထိန်းပါ ။
- အားလုံးကို ကြင်နာသနားပါ ။
- ကိုယ့် ကို ကိုယ်ညှာတာပါ ။
- ရိုးသားပါ ။
- အားမာန်သစ်မွေးပါ ။
- မိမိ၏ ပင်ကိုစွမ်းရည်ကို ဖော်ထုတ်ပါ ။
ဓမ္မဒါနပြုသူ ငြိမ်းအေးထွန်း အချိန် 15:16 No comments: